Prefrontal D1 နှင့် D2 လက်ခံသူများမှစွန့်စားမှုအခြေပြုဆုံးဖြတ်ချက်ချခြင်းအတွက်ခွဲထုတ်ခြင်းများ (၂၀၁၁) - သင့် ဦး နှောက်သည် Porn On
အခြေခံ. ဆုံးဖြတ်ချက်ချအန္တရာယ်မှ Prefrontal D1 နှင့် D2 receptor အားဖြင့် Dissociable contributions (2011)
J ကို neuroscience ။ 2011 ဇွန် 8; 31 (23): 8625-33 ။
စိန့်Önge JR, Abhari H ကို, Floresco SB ။
စိတ်ပညာဌာနနှင့်ဦးနှောက်သုတေသနစင်တာ, ဗြိတိသျှကိုလံဘီယာ, ဗန်ကူးဗားတက္ကသိုလ်, ဗြိတိသျှကိုလံဘီယာ V6T 1Z4, ကနေဒါ
မတူညီတဲ့ပြင်းအားအချို့နှင့်မသေချာမရေရာဆုလာဘ်များအကြားရွေးချယ်မှုဟာတိုကျရိုကျပေါ်၌ရှိသောအမြှေးနှင့် mesocorticolimbic dopamine (DA) စနစ်နှစ်ခုလုံးကကမကထပြုခဲ့ခံရဖို့အဆိုပြုခဲ့ကြသည်။ ကြွက်များတွင်, medial prefrontal cortex (PFC) ၏ DA လှုပ်ရှားမှုသို့မဟုတ် inactivation ၏စနစ်တကျထိန်းသိမ်းရေးဆုံးဖြတ်ချက်အန္တရာယ်များနှင့်ဆုလာဘ်အကြောင်းကိုအောင်နှောင့်အယှက်။ သို့ရာတွင်ထိုသို့ PFC DA ဂီယာကဤလုပ်ငန်းစဉ်ကိုအထောက်အကူပြုရန်မည်သို့မည်ပုံမသိရသေးဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့သည်အသေးငယ်အချို့နှင့်ကြီးမားသေးဖြစ်နိုင်ဖွယ်အလားအလာဆုလာဘ်များအကြားရွေးချယ်မှုအပေါ် medial (prelimbic) PFC အတွက် D1 နှင့် D2 receptors ၏ pharmacological ထိန်းသိမ်းရေးများ၏သက်ရောက်မှုကိုဆန်းစစ်နေဖြင့်ဤပြဿနာကိုဖြေရှင်း။ ကြွက်တဦးတည်းလီဗာ 100% ဖြစ်နိုင်ခြေများနှင့်အခြားလက်သို့အပ်လေးလုံးလေးများနှင့်အတူတဦးတည်းတောင့်ကိုအပ်ဘယ်မှာဖြစ်နိုင်ဖွယ်အလားအလာလျှော့တာဝန်အပေါ်လေ့ကျင့်သင်ကြားပေမယ့်ဆုလာဘ်ကိုလက်ခံရရှိ၏ဖြစ်နိုင်ခြေစမ်းသပ်မှုတွေ (100, 50, 25, 12.5%) ၏လုပ်ကွက်ကိုဖြတ်ပြီးလျော့နည်းသွားသည်။ ခဲ့ကြသည် အဆိုပါ medial PFC အတွက် D1 ပိတ်ဆို့ထားခြင်း (SCH23390) ကိုကြီးမားသော / အန္တရာယ်များ option ကိုများအတွက် preference ကိုလျော့နည်းသွားသည်။ ဆနျ့ကငျြ, D2 ပိတ်ဆို့ထားခြင်း (eticlopride) ဖြစ်နိုင်ဖွယ်အလားအလာလျှော့ခြင်းနှင့်တိုးမြှင့်အန္တရာယ်များရွေးချယ်မှုလျှော့ချ။ အဆိုပါ D1 agonist SKF81297 ကြီး / အန္တရာယ်များလီဗာများအတွက်ဦးစားပေးများတွင်အနည်းငယ်, nonsignificant တိုးစေ၏။ သို့သော် D2 အဲဒီ receptor ဆွ (quinpirole) အသီးသီးလျော့ဈေးကွေး flattening ကပိုပြီးဒါမှမဟုတ်ဒီထက်နည်းအကျိုးရှိအခါကွာအန္တရာယ်များ option ကိုထံမှသို့မဟုတ်ဆီသို့ရွေးချယ်မှု biasing, ဆုံးဖြတ်ချက်ချအတွက်စစ်မှန်သောချို့ယွင်းသွေးဆောင်။ ဤရွေ့ကားတွေ့ရှိချက် PFC D1 နှင့် D2 receptors အန္တရာယ် / ဆုလာဘ်တရားစီရင်ပိုင်ဖို့, dissociable ဖြစ်သော်လည်း, ဖြည့်စွတ်ပံ့ပိုးမှုများကိုစေအကြံပြုအပ်ပါသည်။ D1 / D2 အဲဒီ receptor လှုပ်ရှားမှုအကြားဒဏ်ငွေချိန်ခွင်လျှာသပိတ်မှောက်ခြင်းအားဖြင့်, DA အခြေအနေများပြောင်းလဲသွားသည့်အခါလက်ရှိအဆင်သင့်ခွအေနမြေား၏ခေါင်းပုံဖြတ်သို့မဟုတ်ထိုထက်ပိုအမြတ်အစွန်းမြား၏တူးဖော်ရေးဖြစ်စေမြှင့်တင်ရန်, ဤတရားစီရင်ပိုင်သနျ့ကိုကူညီလိမ့်မည်။
mesocorticolimbic dopamine (DA) စနစ်၏ဆိုးရွားပြင်းထန်မှုသည်အချို့သောစိတ်ရောဂါဆိုင်ရာရောဂါများနှင့်ပတ်သက်သောဆုံးဖြတ်ချက်ချရာတွင်အကြီးအကျယ်လိုအပ်ချက်နှင့်ဆက်စပ်နေသည်။ ဤရွေ့ကား schizophrenia နှင့်အတူတစ် ဦး ချင်းစီ (Hutton et al ။ , 2002), ပါကင်ဆန်ရောဂါ (Pagonabarraga et al ။ , 2007) နှင့်လှုံ့ဆော်စွဲ (Rogers et al ။ , 1999) တို့ပါဝင်သည်။ ဆုံးဖြတ်ချက်ချခြင်း၏တိရိစ္ဆာန်မော်ဒယ်များက DA ထုတ်လွှင့်မှု၏ခြယ်လှယ်မှုများသည်သေးငယ်။ လွယ်ကူစွာရရှိနိုင်သောဆုများနှင့်ကြီးမားသော၊ သို့သော် ပို၍ အကုန်အကျများသောရွေးချယ်မှုများအကြားရွေးချယ်မှုများကိုအကြီးအကျယ်ပြောင်းလဲစေနိုင်သည်ဟုဖော်ပြခဲ့သည်။ D1 သို့မဟုတ် D2 receptors များအားစနစ်တကျပိတ်ဆို့ထားခြင်းကပိုမိုကြာမြင့်စွာစောင့်ဆိုင်းခြင်းသို့မဟုတ်ပိုမိုကြီးမားသောဆုလာဘ်ရရှိရန်ပိုမိုကြိုးစားအားထုတ်ခြင်းတို့ကို ဦး စားပေးသည်။ DA transmission သည်တိုးမြှင့်ခြင်း၊ အားစိုက်ခြင်းသို့မဟုတ်နှောင့်နှေးခြင်းအပေါ် အခြေခံ၍ ဆုံးဖြတ်ချက်ချခြင်းအပေါ်အကျိုးသက်ရောက်သည်၊ ပို။ ကုန်ကျစရိတ် (Cousins ​​et al, 1994; ။ Cardinal et al, 2000; Denk et al, 2005; ။ ဗန် Gaalen et al, 2006; ။ Floresco et al, 2008a; Bardgett et al, 2009 ။ ) ကြွက်တစ်ဦးဖြစ်နိုင်ဖွယ်အလားအလာလျှော့တာဝန်အပေါ်, အသေးစားအချို့နဲ့ကြီးမားတဲ့သေးအန္တရာယ်များဆုလာဘ်အကြားကိုရွေးချယ်တဲ့အခါမှာအလားတူ, D1 သို့မဟုတ် D2 ရန်စနစ်တကျစီမံခန့်ခွဲမှုကြီးမားအန္တရာယ်များရွေးချယ်စရာအဘို့အ preference ကိုလျော့ကျစေပါတယ် (စိန့်Öngeနှင့် Floresco, 2009) ။ ပြောင်းပြန် D1 သို့မဟုတ် D2 ကြီးမားတဲ့အန္တရာယ် options များဆီသို့ဘက်လိုက်မှုရွေးချယ်မှု agonists။ သို့သော်မြောက်မြားစွာဦးနှောက်ဒေသများကြောင်းပေးထားသော (Floresco et al ။ , 2008b) (ဥပမာ, တိုကျရိုကျပေါ်၌ရှိသောအမြှေး ventral striatum, amygdala) အန္တရာယ် / ဆုလာဘ်စီရငျခကျြတို့ကိုပတ်သက်သည်ဟုယူဆရပြီ, DA, ဤဖြစ်စဉ်များကိုသြဇာလွှမ်းမိုးဖို့သရုပ်ဆောင်စေခြင်းငှါအရာပေါ် terminal ကိုဒေသများတွင်မသိရသေးဖြစ်နေဆဲ ။
, Granon et al 1995;; ။ DA ဝီလျံနှင့် Goldman-Rakic, 2000 (ထိုကဲ့သို့သောအပြုအမူပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်, အလုပ်လုပ်မှတ်ဉာဏ်နှင့်အာရုံစူးစိုက်မှုဖြစ်စဉ်များအဖြစ် prefrontal cortex (PFC) ၏ကွဲပြားခြားနားသောဒေသများကကမကထပြုခဲ့မျိုးစုံသိမြင် functions များ, modulates Chudasama နှင့် Robbins, 2004; Floresco et al ။ , 2006), မကြာခဏလည်းအနည်းငယ်သို့မဟုတ်လွန်း DA လှုပ်ရှားမှုအချို့အလုပ်အမှုဆောင်လုပ်ဆောင်ချက်များကိုချို့ယွင်းရှိရာတစ်ဦး "inverted ဦး" -shaped ကွေးအတွက်။ သို့သော်ကုန်ကျစရိတ် / အကျိုးအတွက်ဆုံးဖြတ်ချက်ချ၏ကွဲပြားခြားနားသောပုံစံများကိုမှ PFC DA ဂီယာ၏အလှူငွေစုံစမ်းစစ်ဆေးနှိုင်းယှဉ်အနည်းငယ်လေ့လာမှုများရှိခဲ့ပါပြီ။ အဆိုပါ anterior cingulate အားထုတ်မှု-based ဆုံးဖြတ်ချက်များပွောငျးလဲအတွက် DA လှုပ်ရှားမှုလျှော့ချ (Schweimer et al, 2005; ။ Schweimer နှင့် Hauber, 2006), medial PFC D1 receptors ၏ပိတ်ဆို့ထားခြင်းသို့မဟုတ်ဆွပိုကြီးတဲ့, နှောင့်နှေးဆုလာဘ် (လာကြောင်းတွေ့ဆုံမေးမြန်းထားပါတယ် et al များအတွက် preference ကိုလျော့နည်းစေသော်လည်း, 2010 ။ ) ။ အထူးသ, အန္တရာယ်-based ဆုံးဖြတ်ချက်ချရန်ကွဲပြားခြားနားသော PFC DA receptors များ၏အလှူငွေစုံစမ်းစစ်ဆေးခြင်းမရှိလေ့လာမှုများရှိခဲ့ပါပြီ။
အခြားအငျဒသေ (anterior cingulate, orbitofrontal, နောက်ကျနေခဲ့သည်) တွင်လှုပ်ရှားမှုကဒီအပြုအမူ (စိန့်Öngeနှင့် Floresco, 2010) ကိုအထောက်အကူပြုဖို့ပေါ်လာပါဘူးသော်လည်းမကြာမီကအလုပ်, ဖြစ်နိုင်ဖွယ်အလားအလာလျှော့များ၏ကြားဝင်ဖြန်ဖြေအတွက်အရေးပါသောဒေသအဖြစ် prelimbic medial PFC ဖော်ထုတ်ခဲ့သည်။ အဆိုပါ medial PFC ၏ Inactivation သူတို့ကိုရယူ၏အလေးသာနေတဲ့ session တစ်ခုကျော်လျော့နည်းသွားတဲ့အခါမှာပိုမိုကြီးမား, ဖြစ်နိုင်ဖွယ်အလားအလာဆုလာဘ်များအတွက် preference ကိုတိုးလာပေမယ့်ဆုလာဘ်ဖြစ်နိုင်ခြေတစ် session တစ်ခုကျော်တိုးလာတဲ့အခါမှာရှေးခယျြမှုလျော့နည်းသွားသည်။ ဤလေ့လာမှု၏ရလဒ်များ medial PFC ပိုပြီးထိရောက်ဆုံးဖြတ်ချက်ချလွယ်ကူချောမွေ့ကြောင်းတန်ဖိုးကိုကိုယ်စားပြု update လုပ်ဖို့ဆုလာဘ်ဖြစ်နိုင်ခြေပြောင်းလဲနေတဲ့အကြောင်းသတင်းအချက်အလက်ပေါင်းစည်းဖို့တာဝန်ထမ်းဆောင်ကောက်ချက်ချဖို့ကျွန်တော်တို့ကိုဦးဆောင်ခဲ့သည်။ DA သိမှတ်ခံစားမှု (Floresco နှင့် Magyar, 2006) ၏အခြားပုံစံများအတွက်ကစား mesocortical သောအရေးပါသောအခန်းကဏ္ဍပေးထား, ပစ္စုပ္ပန်လေ့လာမှုတစ်ခုဖြစ်နိုင်ဖွယ်အလားအလာလျှော့တာဝန်သုံးပြီးအောင်အန္တရာယ်-based ဆုံးဖြတ်ချက်မှ prefrontal D1 / D2 အဲဒီ receptor လှုပ်ရှားမှုများ၏အလှူငွေစုံစမ်းစစ်ဆေး။
အလေ့အကျင့်လေ့ကျင့်မှုအစတွင် ၂၇၅-၃၀၀ ဂရမ်အလေးချိန်ရှိသော Long-Evans ကြွက် (Charles River Laboratories) ကိုစမ်းသပ်မှုတွင်အသုံးပြုခဲ့သည်။ ဆိုက်ရောက်ချိန်တွင်ကြွက်များကိုကိုလိုနီအဖြစ်သတ်မှတ်ရန် ၁ ပတ်ပေးခဲ့ပြီးအစာကျွေးမှုမတိုင်မီနောက်ထပ်အပတ်တွင်အစာကိုသူတို့အစာမစားသော ၈၅ မှ ၉၀% အထိအကန့်အသတ်ဖြင့်သာစားခဲ့သည်။ စမ်းသပ်မှုကာလအတွင်းကြွက်များအား ad libitum အသုံးပြုခွင့်ကိုပေးခဲ့သည်။ စမ်းသပ်မှုနေ့အဆုံး၌ကြွက်များ၏အိမ်၌အိတ်များ၌အစာကျွေးခြင်းနှင့်စမ်းသပ်မှု၏ကျန်အပိုင်းအတွက်အစားအစာကန့်သတ်ခြင်းနှင့်ထိန်းသိမ်းခြင်းသို့မဟုတ်ကိုယ်အလေးချိန်တိုးခြင်းတို့တွင်ကိုယ်အလေးချိန်ကိုနေ့စဉ်စောင့်ကြည့်စစ်ဆေးသည်။ စမ်းသပ်မှုအားလုံးသည်ကနေဒါတိရစ္ဆာန်စောင့်ရှောက်ရေးကောင်စီနှင့်ဗြိတိသျှကိုလံဘီယာတက္ကသိုလ်၏တိရိစ္ဆာန်စောင့်ရှောက်မှုကော်မတီနှင့်အညီဖြစ်သည်။
တစ်ခုချင်းစီကိုလေဝင်လေထွက်ပေးဖို့နဲ့ဆိုတဲ့စကားလုံးမလိုတော့ဘူးဆူညံသံ mask တစ်ခုပန်ကာတပ်ဆင်, အသံ-attenuating သေတ္တာထဲမှာပူးတွဲ; အပြုအမူစမ်းသပ်ခြင်း (Med Associates မှ 12 × 30.5 × 24 စင်တီမီတာ) 21 အော်ပရေတာအခန်းကောက်ယူခဲ့သည်။ တစ်ခုချင်းစီကိုအခန်းထဲသို့နှစ်ခုပြန်လည်ရုပ်သိမ်းပေးရန်ခရိုနီတွေနဲ့တပ်ဆင်ခဲ့ပါတယ်, အစားအစာအားဖြည့် (45 mg; Bio-စားသုံးခြင်း) ရှိရာဗဟိုအစားအသောက် receptacle တစ်ခုချင်းစီဘက်မှာတည်ရှိပြီးတစ်ခုတောင့်သာသနာကနေတစ်ဆင့်ကိုအပ်ခဲ့သည်။ အခန်းခရိုနီဆန့်ကျင်ဘက်မြို့ရိုးအထိပ်-အလယ်ဗဟိုတွင်တည်ရှိသည်တစ်ခုတည်း 100 Ma အိမ်သူအိမ်သားအလင်းဖြင့် illuminated ခဲ့ကြသည်။ လေးအနီအောက်ရောင်ခြည် photobeams တစ်ခုချင်းစီကိုအခန်းထဲသို့၏နှစ်ဖက်ပေါ်တွင်တပ်ဆင်ထားခဲ့သည်။ Locomotor လှုပ်ရှားမှုတစ် session တစ်ခုအတွင်းမှာဖြစ်ပွားခဲ့သည်ကြောင်း photobeam လပ်ချိန်၏အရေအတွက်အားဖြင့်ရည်ညွှန်းခဲ့သည်။ အားလုံးစမ်းသပ်ဒေတာတစ်ခု interface မှတစ်ဆင့်အခန်းနဲ့ချိတ်ဆက်ထားတဲ့ IBM ကပုဂ္ဂိုလ်ရေးကွန်ပျူတာကမှတ်တမ်းတင်ခဲ့ကြသည်။
Cardinal et al ထံမှအဆင်ပြေအောင်အဖြစ်ကျွန်ုပ်တို့၏ကနဦးလေ့ကျင့်ရေး protocols များ, စိန့်Öngeနှင့် Floresco (2009) ၏သူတို့အားတူညီခဲ့ကြသည်။ (2000) ။ အခန်းဖို့သူတို့ရဲ့ပထမဦးဆုံးထိတွေ့ရှေ့တော်၌ထိုနေ့ရက်တွင်, ကြွက်များကိုသူတို့နေအိမ်လှောင်အိမ်ထဲမှာ ~25 သကြားဆုလာဘ်လုံးလေးများပေးထားခဲ့ကြသည်။ သင်တန်း၏ပထမဦးဆုံးနေ့ရက်တွင်, 2-3 လုံးလေးများအစားအစာခွက်ကိုသို့အပ်ခဲ့သည်နှင့်တိရိစ္ဆာန်အခနျးထဲမှာထည့်ထားခင်နှိပ်စက်ခြင်းကိုခံရလုံးလေးများဟာလီဗာအပေါ်ထားရှိခဲ့ကြသည်။ ကြွက်ပထမဦးဆုံးတဦးတည်းလီဗာများအတွက်ပထမဦးဆုံး 1 မိအတွက်ကိုတိုက်တွန်း, ပြီးတော့ (ညာဘာသာရပ်များအကြား / left counterbalanced) အခွားလီဗာများအတွက်ထပ်ခါတလဲလဲ 60 တစ်စံနှုန်းတစ်ခု fixed-အချိုး 30 အချိန်ဇယားအောက်တွင်လေ့ကျင့်သင်ကြားပေးခဲ့သည်။ ကြွက်ထို့နောက်အပြည့်အဝတာဝန်တစ်ခုရိုးရှင်းသောဗားရှင်းအပေါ်လေ့ကျင့်သင်ကြားပေးခဲ့သည်။ ဤရွေ့ကား 90 ရုံးတင်စစ်ဆေးအစည်းအဝေးများပြန်ရုပ်သိမ်းခရိုနီများနှင့်မှောင်မိုက်၌အော်ပရေတာအခန်းထဲကအတူစတင်ခဲ့သည်။ တိုင်း 40 s ကိုတစ်ဦးရုံးတင်စစ်ဆေးအိမ်တော်ကိုအလင်း၏ illumination နှင့်ခနျးထဲသို့နှစ်ခုခရိုနီတဦး၏ insertion နှင့်အတူအစပျိုးခဲ့သည်။ ကြွက် 10 ့အတွင်းလီဗာအပေါ်တုံ့ပြန်ရန်ပျက်ကွက်လျှင်, လီဗာအခနျးမိုက်, ပြန်ရုပ်သိမ်းခဲ့သည်, ထိုစမ်းသပ်မှုတစ်ခုပျက်ကွက်အဖြစ်သွင်းယူပေးခဲ့သည်။ ကြွက် 10 ့အတွင်းတုံ့ပြန်လျှင်, လီဗာပြန်ရုပ်သိမ်းနှင့်တစ်ခုတည်းတောင့် 50% ဖြစ်နိုင်ခြေနှင့်အတူကယ်နှုတ်ခဲ့သည်။ ဒီအလုပျထုံးလုပျနညျးအပြည့်အဝတာဝန်များ၏ဖြစ်နိုင်ဖွယ်အလားအလာသဘောသဘာဝနှင့်အတူကြွက်ရင်းနှီးကျွမ်းဝင်စေရန်အသုံးပြုခဲ့သည်။ စမ်းသပ်မှုတွေအမှုအမျိုးမျိုးရှိသမျှ pair တစုံအတွက်, လက်ဝဲသို့မဟုတ်လက်ယာလီဗာတစ်ကြိမ်တင်ပြခြင်း, စမ်းသပ်မှုတွေ၏ pair တစုံအတွင်းအမိန့်ကျပန်းခဲ့ပါတယ်။ ကြွက်5သို့မဟုတ်ထိုထက်ပိုအောင်မြင်တဲ့စမ်းသပ်မှုတွေ (; ≤6ပျက်ကွက်ဆိုလိုသည်မှာ) ၏စံနှုန်းမှာမှ ~80-10 ဃများအတွက်လေ့ကျင့်သင်ကြားပေးခဲ့သည်။
ဒီလေ့လာမှုတွေမှာအသုံးပြုတဲ့အဓိကလုပ်ငန်းတာဝန် (ယခင်က Floresco နှင့် Whelan, 2009 ဖော်ပြထားခဲ့ပြီး; ။ Ghods-Sharifi et al, 2009; စိန့် Öngeနှင့် Floresco, 2009, 2010; စိန့် Önge et al ။ , 2010) နှင့်မူလက Cardinal နှင့် Howes (2005) (ပုံအားဖြင့်ဖော်ပြထားကြောင်းကနေပြင်ဆင်ခဲ့သည်။ 1) ။ အတိုချုပ်, ကြွက် 72 စမ်းသပ်မှုတွေ၏4လုပ်ကွက်သို့ရွေးချယ်ခွဲ ထား. 18 စမ်းသပ်မှုတွေပါဝင်သည်ဟုနေ့စဉ်အစည်းအဝေးများလက်ခံရရှိခဲ့သည်။ တစ်ခုလုံးကို session တစ်ခုဖြည့်စွက်ရန် 48 မိကို ယူ. , တိရိစ္ဆာန်များတစ်ပတ်ကို 6-7 ဃလေ့ကျင့်သင်ကြားပေးခဲ့သည်။ တစ်ဦးက session ကိုပြန်ရုပ်သိမ်းနှစ်ဦးစလုံးခရိုနီ (ထို intertrial ပြည်နယ်) နဲ့မှောင်မိုက်၌စတင်ခဲ့သည်။ တစ်ဦးကတရားခွင်တိုင်း 40 s ကိုအိမျတျောကိုအလင်း၏ illumination နှင့်,3့အကြာတွင်အခနျးထဲသို့ဝတစ်ဦးသို့မဟုတ်နှစ်ဦးစလုံးခရိုနီများ၏သွင်း (ကတစ်ခုတည်းစုံစမ်းရာ format ကိုပုံမှာပြသတာဖြစ်ပါတယ်စတင်ခဲ့သည်။ 1) ။ တဦးတည်းလီဗာ, လေ့ကျင့်ရေး (counterbalanced လက်ဝဲ / ညာ) လျှောက်လုံးတသမတ်တည်းကျန်ရစ်သည့်အခြားအသေး / အခြို့သောလီဗာ, ကြီး / အန္တရာယ်များလီဗာ designated ခဲ့သည်။ ကြွက် 10 s ကိုလီဗာတင်ဆက်မှု၏အတွင်းလီဗာကိုနှိပ်ခြင်းဖြင့်တုနျ့ပွနျဘူးဆိုရငျ, အခနျးလာမည့်ရုံးတင်စစ်ဆေး (ပျက်ကွက်) အထိ intertrial ပြည်နယ်မှ reset ခဲ့သည်။ တစ်ဦးလီဗာရှေးခယျြခဲ့သည့်အခါနှစ်ဦးစလုံးခရိုနီပြန်ရုပ်သိမ်း။ ငယ် / အခြို့သောလီဗာ၏ရှေးခယျြမှုအစဉ်အမြဲ 100% ဖြစ်နိုင်ခြေနှင့်တသားတတောင့်ကိုအပ်; ကြီး / အန္တရာယ်များလီဗာ၏ရွေးချယ်မှု4လုံးလေးများကိုအပ်ပေမယ့်တစ်ဦးအထူးသဖြင့်ဖြစ်နိုင်ခြေနှင့်အတူ။ အစားအစာကိုကယ်နှုတ်တော်မူ၏ခံခဲ့ရသည့်အခါတစ်ဦးတုန့်ပြန်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်, အိမ်အလင်းအခနျးဟာ intertrial ပြည်နယ်မှနောက်ကျောသို့ပြောင်းပေးသောအပြီးနောက်ထပ်4s အတွက်ကျန်ရစ်၏။ အကွိမျမြားစှာလုံးလေးများဆိတ်ကွယ်ရာ 0.5 s ကိုအပ်။ , အဆိုပါ4လုပ်ကွက်တစ်ဦးတည်းသာလီဗာတစ်ဦးချင်းစီဘလောက်ထဲမှာပိုကြီးသို့မဟုတ်သေးငယ်ဆုလာဘ်ကိုလက်ခံရရှိ၏ဆွေမျိုးဖြစ်နိုင်ခြေအကြောင်းကိုလေ့လာသင်ယူရန်တိရိစ္ဆာန်များခွင့်ပြု, (အားလုံးအတွက် randomized တစ်ခုချင်းစီကိုလီဗာများအတွက် 8 စမ်းသပ်မှုတွေ) ပေးအပ်ခဲ့သည့်အတွက်4အတင်းအဓမ္မ-ရွေးချယ်မှုစမ်းသပ်မှုတွေ၏ဖွဲ့စည်းခဲ့ကြသည်။ ဤသည်နှစ်ဦးစလုံးခရိုနီတင်ပြခြင်းနှင့်တိရစ္ဆာန်တို့သည် / အသေးအချို့ဒါမှမဟုတ်ကြီးမားတဲ့ / အန္တရာယ်များလီဗာဖြစ်စေရှေးခယျြခဲ့ခဲ့ကြသည်ရသော 10 အခမဲ့-ရွေးချယ်မှုစမ်းသပ်မှုတွေကနောက်တော်သို့လိုက်ခဲ့သည်။ လုပ်ကွက်တစ်ဝှမ်းကွဲပြားကြီး / အန္တရာယ်များလီဗာကိုနှိပ်ပြီးနောက်4လုံးလေးများရယူများ၏ဖြစ်နိုင်ခြေ: ကတစ်ဦးချင်းစီအဆက်ဆက်သည်ပိတ်ပင်တားဆီးမှုအဘို့, ပိုင်းတွင်အသီးသီးထို့နောက် 100%, 50%, 25% နှင့် 12.5%, ဖြစ်ခဲ့သည်။ တစ်ခုချင်းစီကိုရုံးတင်စစ်ဆေးအပေါ်ကြီးမားသောဆုလာဘ်ကိုလက်ခံရရှိများ၏ဖြစ်နိုင်ခြေစုတခုဖြစ်နိုင်ခြေဖြန့်ဖြူးခြင်းမှရေးဆွဲခဲ့သည်။ ကြွက်ဟာ 25% ပိတ်ပင်တားဆီးမှုကာလအတွင်းဖြစ်စေလီဗာအပေါ်တုံ့ပြန်ပြီးနောက်အစားအစာလုံးလေးများတစ်ခုနှင့်ညီမျှအရေအတွက်ကရယူပေးနိုင်သော်လည်းထိုအဖြစ်နိုင်ခြေကိုသုံးပြီး, ကြီး / အန္တရာယ်များလီဗာ၏ရွေးချယ်မှု, ပြီးခဲ့သည့်ပိတ်ပင်တားဆီးမှုအတွက်ပထမဦးဆုံးနှစ်ဦးကိုလုပ်ကွက်များတွင်အကျိုးရှိဖြစ်, နှင့်အားနည်းချက်များကိုလိမ့်မယ်။ ထို့ကြောင့်ဤလုပ်ငန်းတာဝန်၏နောက်ဆုံးသုံးရုံးတင်စစ်ဆေးလုပ်ကွက်ထဲမှာ, ပိုကြီးတဲ့ဆုလာဘ် option ကိုရွေးချယ်ခြင်းကပေးထားသောရုံးတင်စစ်ဆေးအပေါ်မည်သည့်ဆုလာဘ်ရယူမဟာမွေးရာပါ "အန္တရာယ်" သယ်ဆောင်။ တစ်ဦးရွေးချယ်မှုနှင့်ယေဘုယျ locomotor လှုပ်ရှားမှု (photobeam လပ်ချိန်) စတင်ရန် latency ကိုလည်းမှတ်တမ်းတင်ခဲ့ပါသည်။ အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့အဖြစ်သူတို့ (1) အောင်မြင်သောစမ်းသပ်မှုတွေအနည်းဆုံး 100% ပေါ်ပထမဦးဆုံးစမ်းသပ်လုပ်ကွက် (80% ဖြစ်နိုင်ခြေ) အတွင်းကြီးမားသော / အန္တရာယ်များလီဗာကို ရွေးချယ်. , နှင့် (2) ၏တည်ငြိမ်အခြေခံအဆင့်ဆင့်ကိုသရုပ်ပြ, သည်အထိကြွက် task ကိုပေါ်လေ့ကျင့်သင်ကြားခဲ့သည် ရှေးခယျြမှု, Winstanley et al အားဖြင့်ဖော်ပြထားကြောင်းနှင့်ဆင်တူနေတဲ့လုပ်ထုံးလုပ်နည်းသုံးပြီးအကဲဖြတ်။ (2005) နှင့်စိန့် Öngeနှင့် Floresco (2009) ။ အကျဉ်းများတွင်သုံးနှစ်ဆက်တိုက်အစည်းအဝေးများအနေဖြင့်ဒေတာနှစ်ခုအတွင်း-ဘာသာရပ်အချက်များ (နေ့နှင့်စမ်းသပ်ပိတ်ပင်တားဆီးမှု) နဲ့အထပ်ထပ်-အစီအမံ ANOVA နှင့်အတူဆန်းစစ်ခဲ့ကြသည်။
Task ကိုဒီဇိုင်း။ ကုန်ကျစရိတ် / လီဗာ (က) နှင့်ဖြစ်နိုင်ဖွယ်အလားအလာလျှော့တာဝန်အပေါ်တစ်ခုတည်းအခမဲ့-ရွေးချယ်မှုရုံးတင်စစ်ဆေး (ခ) ၏ပုံစံကိုဖြစ်စေအပေါ်တုံ့ပြန်နဲ့ဆက်စပ်ပေါ်ဖြစ်ပေါ်အကျိုးကျေးဇူးရရှိမှာပါ။
ကျွန်တော်ယခင်ကပွုပါပွီအဖြစ် (Ghods-Sharifi et al, 2009; ။ အဆို့နှင့် Floresco, 2011), ကျနော်တို့လျှင်အထူးသဖြင့်ကုသမှုအထူးဖြစ်နိုင်ဖွယ်အလားအလာလျှော့တာဝန်အပေါ်ကြီးမား / အန္တရာယ်များလီဗာများအတွက် preference ကိုယုတ်လျော့စေတဲ့ဦး, အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်များ၏သီးခြားအုပ်စုများစိတ်ပိုင်းဖြတ် ဒီအကျိုးသက်ရောက်မှုနှစ်ခုခရိုနီတွေနဲ့ဆက်စပ်ဆုလာဘ်ပြင်းအားအကြားတှေးတခုချို့ယွင်းမှုကြောင့်ဖြစ်ခဲ့သည်ရှိမရှိဆုံးဖြတ်ရန်အကျိုးကိုပြင်းအားခွဲခြားဆက်ဆံမှုတာဝန်အပေါ်လေ့ကျင့်သင်ကြားခြင်းနှင့်စုံစမ်းစေလိမ့်မယ်။ ဤအစမ်းသပ်ချက်များတွင်ကြွက်များသူတို့ကခွဲခြားဆက်ဆံမှုတာဝန်အပေါ်လေ့ကျင့်သင်ကြားခဲ့ပြီးသောနောက်, ဖြစ်နိုင်ဖွယ်အလားအလာလျှော့တာဝန်ထဲမှာရှိသကဲ့သို့ပြန်လည်ရုပ်သိမ်းပေးရန်ခရိုနီနှိပ်ဖို့လေ့ကျင့်သင်ကြားပေးခဲ့သည်။ ဤတွင်, ကြွက်တဦးတည်းတောင့်နှင့်လေးလုံးလေးများကယ်မနှုတ်ကြောင်းကိုအခြားကယ်မနှုတ်ကြောင်းကိုတဦးတည်းလီဗာအကြားရွေးချယ်ခဲ့သည်။ နှစ်ဦးစလုံးဟာအသေးစားနှင့်အကြီးစားဆုလာဘ်ချက်ချင်း 100% ဖြစ်နိုင်ခြေနှင့်အတူတစ်ခုတည်းတုံ့ပြန်မှုပြီးနောက်ကိုအပ်။ , တစ်ဦးက session တစ်ခု2အခမဲ့-ရွေးချယ်မှုစမ်းသပ်မှုတွေအားဖြင့်နောက်တော်သို့လိုက် 10 အတင်းအဓမ္မ-ရွေးချယ်မှုပါဝင်သည်ဟုဦးချင်းစီပိတ်ပင်တားဆီးမှုနှင့်အတူစမ်းသပ်မှုတွေ၏လေးလုပ်ကွက်ပါဝင်သည်။
အုပ်စု3ရက်ဆက်တိုက်ရွေးချယ်မှုတည်ငြိမ်ပုံစံများကိုပြသတစ်ချိန်ကကြွက်ခွဲစိတ်အကြောင်းမဲ့ခဲ့ကြသည်။ တည်ငြိမ်မှုစံနှုန်းအောင်မြင်ခဲ့ပါသည်ပြီးနောက်ကြွက်အစားအသောက်ကြော်ငြာ libitum ထောက်ပံ့ပေးခဲ့ကြသည်နှင့်အ,2အကြာတွင် stereotaxic ခွဲစိတ်d။ anteroposterior + 100 မီလီမီတာ;; medial-lateral, ±7/ ကီလိုဂရမ် ketamine Hydrochloride mg နှင့် 23 / ကီလိုဂရမ် xylazine MG ခဲ့ပြီးနောက်ပိုင်းတွင် medial PFC (ပြားချပ်ချပ်ဦးခေါင်းခွံ၏ prelimbic ဒေသတွင်းသို့နှစ်နိုင်ငံ 3.4 gauge သံမဏိလမ်းညွှန် cannulae နှင့်အတူကိုထညျ့သှငျးနှင့်အတူကြွက် anesthetized ခဲ့ကြသည် 0.7 bregma ထံမှမီလီမီတာနှင့် dorsoventral, အီရတ်ကနေ -2.8 မီလီမီတာ) ။ အဆိုပါတာဟာလုပ်ခဲ့ကြသည်သည်အထိလမ်းညွှန် cannulae ၏အဆုံးနှင့်အတူ flush သုံးဆယ် gauge obdurators, အရပျ၌ရှိနေဆဲဖြစ်သည်။ ကြွက်ကအနည်းဆုံး7ဃစမ်းသပ်ခြင်းမပြုမီခွဲစိတ်မှထမြောက်ရသောအခွင့်ကိုရကြ၏။ ဒီပြန်လည်ထူထောင်ရေးကာလအတွင်းတိရိစ္ဆာန်များမှာအနည်းဆုံးနေ့ရက်တိုင်းနှင့်အစားအစာမိ5သူတို့ရဲ့အခမဲ့-နို့တိုက်ကျွေးမှုအလေးချိန်၏ 85% အထိကန့်သတ်ခံခဲ့ရမှုအတွက်ကိုင်တွယ်ခဲ့သည်။ ခန္ဓာကိုယ်အလေးအဆက်မပြတ်ဒီပြန်လည်ထူထောင်ရေးကာလအတွင်းပုံမှန်ကိုယ်အလေးချိန်သေချာစေရန်နေ့စဉ်အခြေခံပေါ်မှာစောင့်ကြည့်ခဲ့ကြသည်။
Microinfusion protocol ကို။
ခွဲစိတ်ရာမှပြန်လည်နာလန်ထူပြီးနောက်ကြွက်နောက်ပိုင်းတွင်အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့အဖြစ်, သူတို့ကရှေးခယျြမှုအပြုအမူများတည်ငြိမ်အဆင့်ဆင့်ပြသအနည်းဆုံး5ဃအဘို့နှင့်သည်အထိဖြစ်စေသည့်ဖြစ်နိုင်ဖွယ်အလားအလာလျှော့သို့မဟုတ်ဆုလာဘ်ပြင်းအားခွဲခြားဆက်ဆံမှုတာဝန်အပေါ် retrained ခဲ့ကြသည်။ ပထမဦးဆုံး microinfusion စမ်းသပ်မှုနေ့ကမတိုင်မီ3ဃအဘို့, obdurators ဖယ်ရှားခံခဲ့ရသည်နှင့်တစ်ဦးပြောင်လှောင်ပြုတ်ရည်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းအုပ်ချုပ်ခဲ့သည်။ သံမဏိ injectors2မိများအတွက်လမ်းညွှန် cannulae ထဲတွင်နေရာ, ဒါပေမယ့်ဘယ်သူမျှမပြုတ်ရည်ရာအရပျကိုယူခဲ့ကြသည်။ ဒါဟာလုပ်ထုံးလုပ်နည်းတာဟာများ၏လုပ်ရိုးလုပ်စဉ်မှလေ့ကြွက်နောက်ဆက်တွဲစမ်းသပ်မှုရက်စိတ်ဖိစီးမှုလျှော့ချရန်။ တည်ငြိမ်လျှော့ပြသပြီးနောက်အဆိုပါနေ့, အုပ်စုနေ့က၎င်း၏ပထမဆုံး microinfusion စမ်းသပ်ရရှိခဲ့သည်။
တစ်ဦးကအတွင်း-ဘာသာရပ်များဒီဇိုင်းအားလုံးစမ်းသပ်ချက်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သည်။ အောက်ပါမူးယစ်ဆေးဝါးများအသုံးပြုခဲ့ကြသည်: အ D1 ရန် R - (+) - SCH23390 Hydrochloride (1.0 μg, 0.1 μg; Sigma-Aldrich), အ D2 ရန် eticlopride Hydrochloride (1.0 μg, 0.1 μg; Sigma-Aldrich), အ D1 အဲဒီ receptor agonist SKF81297 (0.4 μg, 0.1 μg; Tocris Bioscience), နှင့် D2 agonist quinpirole (10 μg, 1 μg; Sigma-Aldrich) ။ အားလုံးမူးယစ်ဆေးဖျက်သိမ်းသည်အထိ sonicated နှင့်အလင်းမှကာကွယ်, ဇီဝကမ္မ 0.9% ဆားအတွက်ဖျက်သိမ်းခံခဲ့ရသည်။ ရွေးချယ်ထားသောဆေးများအားလုံးကောင်းစွာ Seaman et al (intracerebrally ပေးသောအခါ, အပြုအမူတက်ကြွဖြစ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အုပ်စုတစ်စုနှင့်အခြားသူများနှစ်ဦးစလုံးအားဖြင့်မှတ်တမ်းတင်ခဲ့ကြ, 1998; ။ Ragozzino, 2002; Chudasama နှင့် Robbins, 2004; Floresco နှင့် Magyar, 2006; Floresco et al ။ 2006; Haluk နှင့် Floresco, 2009; ။ လာကြောင်းတွေ့ဆုံမေးမြန်းထားပါတယ် et al, 2010) ။
အဆိုပါ D1 နှင့် D2 ရန်၏ပြုတ်ရည်, agonists နှင့်ဆား 30 တစ်မှုနှုန်းμl / 0.8 မှာ PE Tube နှင့်လမ်းညွှန်၏အဆုံးအတိတ် 0.5 မီလီမီတာ protruded ကြောင်း 75 gauge cannulae မှချိတ်ဆက်နေတဲ့ microsyringe စုပ်စက်မှတဆင့် medial PFC သို့မြန်မာနိုင်ငံသအုပ်ချုပ်ခဲ့သည် s ကို။ injection cannulae ပျံ့နှံ့ဘို့ခွင့်ပြုထားတဲ့အပိုဆောင်း 1 မိဘို့ရာအရပျ၌ကနျြခဲ့သညျ။ တစ်ခုချင်းစီကိုကြွက်အပြုအမူစမ်းသပ်ခြင်းမပြုမီအခြား 10 မိကာလအတွက်၎င်း၏နေအိမ်လှောင်အိမ်ထဲမှာရှိနေဆဲဖြစ်သည်။
ဒြပ်ပေါင်းလေးမျိုးချင်းစီ၏အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုစမ်းသပ်ရန်ကြွက်များအားသီးခြားအုပ်စုလေးခု (D1 antagonist, D2 antagonist, D1 agonist, D2 agonist) ကိုအသုံးပြုခဲ့သည်။ ကုသမှုအစီအစဉ် (ဆား၊ အနိမ့်ဆေး၊ အမြင့်) သည်ကုသမှုအစီအစဉ်ကိုသီးခြားကုသမှုအဖွဲ့တစ်ခုအတွင်းရှိကြွက်များ၌ဟန်ချက်ညီအောင်ထိန်းညှိထားသည်။ ပထမ ဦး ဆုံးပြုတ်ရည်စမ်းသပ်စစ်ဆေးမှုနေ့အပြီးတွင်ကြွက်များသည်အခြေခံလေ့ကျင့်ရေးနေ့ (ပြုတ်ရည်မရှိ) ရရှိခဲ့သည်။ ကြွက်တစ်ကောင်စီအတွက်ဒီနေ့တွင်ကြီးမားသော / အန္တရာယ်ရှိသောလီဗာကိုရွေးချယ်မှုသည်၎င်း၏ကြိုတင်ပြန့်ပွားမှုအခြေခံမှ> ၁၅% နှင့်သွေဖည်ပါကကြွက်သည်ဒုတိယပြုတ်ရည်စမ်းသပ်မှုမတိုင်မီနောက်ထပ်သင်တန်းတစ်ခုထပ်မံရရှိသည်။ နောက်တစ်နေ့တွင်ကြွက်များသည်ဒုတိယဟန်ချက်ညီသည့်ပြုတ်ရည်ကိုရရှိကြသည်။ နောက်တစ်နေ့တွင်နောက်အခြေခံနှင့်နောက်နောက်ဆုံးဆေးကိုရရှိခဲ့သည်။
အားလုံးအမူအကျင့်စမ်းသပ်ပြီးစီးပြီးနောက်ကြွက်တစ်ကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုက်ဓာတ်ငွေ့အခန်းသေဆုံးခဲ့သည်။ ဦးနှောက်တစ် 4% formalin ဖြေရှင်းချက်ထဲမှာဖယ်ရှားခြင်းနှင့် fixed ခဲ့ကြသည်။ ဦးနှောက် cresyl ခရမ်းရောင်နှင့်အတူတပ်ဆင်ထားခြင်းနှင့်စွန်းမခံရမီအေးခဲခြင်းနှင့် 50 μmကဏ္ဍများအတွက်လိုက်သည်ကိုခံခဲ့ရသည်။ နေရာချထားမှုကို Paxinos နှင့် Watson (1998) ၏ neuroanatomical Atlas မှရည်ညွှန်းနှင့်အတူစစ်ဆေးအတည်ပြုခဲ့ကြသည်။ အဆိုပါ medial PFC အတွက်လက်ခံနိုင်ဖွယ်တာဟာများ၏တည်နေရာများကိုပုံ2၏ညာဘက်ပြားအတွက်တင်ပြနေကြပါတယ်။
တစ်သျှူးဆိုင်ရာဘာသာရပ်။ အားလုံးကြွက်များအတွက် medial PFC ၏ rostral-caudal အတိုင်းအတာမှတဆင့်တာဟာ၏လက်ခံနိုင်ဖွယ်တည်နေရာအကွာအဝေးဖေါ်ပြခြင်းကြွက်ဦးနှောက်၏ Coronal အပိုင်းသိထား။
အကျိုးစီးပွား၏အဓိကမှီခိုသောအတိုင်းအတာသည်လွတ်လပ်စွာရွေးချယ်နိုင်သောစမ်းသပ်မှုတစ်ခုစီအတွက်ကြီးမားသော / အန္တရာယ်များသည့်လီဗာဆီသို့ ဦး တည်သောရွေးချယ်မှုရာခိုင်နှုန်းဖြစ်သည်၊ လုပ်ကွက်တစ်ခုစီအတွက်၊ ၎င်းသည်အောင်မြင်သောစမ်းသပ်မှုများ၏စုစုပေါင်းအရေအတွက်အားဖြင့်ကြီးမားသော / အန္တရာယ်ရှိသောလီဗာ၏ရွေးချယ်မှုအရေအတွက်ကိုခွဲဝေခြင်းဖြင့်တွက်ချက်သည်။ မူးယစ်ဆေးဝါးအုပ်စုတစ်ခုချင်းစီအတွက်ရွေးချယ်ထားသောအချက်အလက်များကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း (ဆား၊ အနိမ့်ဆေး၊ ဆေးပမာဏမြင့်မားစွာ) နှင့်စမ်းသပ်မှုပိတ်ပင်တားဆီးမှု (၁၀၀၊ ၅၀၊ ၂၅၊ ၁၂.၅%) ကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ။ ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခဲ့သည်။ ကြီးမားသောဆုလာဘ်များ၏ဖြစ်နိုင်ခြေလေးခုကိုဖြတ်ပြီးပြောင်းလဲသွားအဖြစ်ကြွက်ကြီးများ / အန္တရာယ်များသောလီဗာ၏ရွေးချယ်မှုလျှော့ကြောင်းညွှန်ပြ, ရွေးချယ်မှုဒေတာများအတွက်ပိတ်ပင်တားဆီးမှု၏အဓိကအကျိုးသက်ရောက်မှုအားလုံးလျှော့စမ်းသပ်ချက် (p <100) အတွက်သိသာသည်။ ဤအကျိုးသက်ရောက်မှုကိုနောက်ထပ်ဖော်ပြမည်မဟုတ်ပါ။ တုံ့ပြန်မှု latency, locomotor လှုပ်ရှားမှု (photobeam ချိုး) နှင့်ရုံးတင်စစ်ဆေးပျက်ကွက်၏နံပါတ်တလမ်း ANOVAs နှင့်အတူခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခဲ့ကြသည်။
ယခင် SectionNext ပုဒ်မ
တိရစ္ဆာန်များ၏လေးအုပ်စုများပိုင်းတွင်သီးခြားစမ်းသပ်မှုတွေအတွက်လေ့ကျင့်သင်ကြားခြင်းနှင့်လေးမူးယစ်အုပ်စုများ၏တဦးတည်းမှခွဲဝေပေးခဲ့သည်။ D16 နှင့် D1 ရန်စမ်းသပ်မှုများအတွက်သတ်မှတ်ထားသော2၏ပထမဦးဆုံးအုပ်စုနှစ်စုအသီးအသီး, တည်ငြိမ်ရွေးချယ်မှုစွမ်းဆောင်ရည်သို့ရောက်ရှိနှင့် counterbalanced microinfusion စမ်းသပ်မှုလက်ခံရရှိမတိုင်မီသင်တန်း 28 ဃပျမ်းမျှလိုအပ်သည်။ အဆိုပါ D14 နှင့် D14 agonists များအတွက် 1 နှင့်2ကြွက်၏ဒုတိယအုပ်စုနှစ်စုတည်ငြိမ်ရွေးချယ်မှုစွမ်းဆောင်ရည်မရောက်မီသင်တန်း 34 ဃပျမ်းမျှလိုအပ်သည်။ လေးယောက်စလုံးအုပ်စုများအတွက်စမ်းသပ်မှုရက်ရရှိသောတုံ့ပြန်မှုအောင်းနေချိန်, locomotor နှင့်ရုံးတင်စစ်ဆေးပျက်ကွက်ဒေတာစားပွဲတင် 1 အတွက်တင်ပြနေကြပါတယ်။
စက်ခေါင်း, ရုံးတင်စစ်ဆေးပျက်ကွက်လျက်, medial PFC သို့ဆားသို့မဟုတ်မူးယစ်ဆေးတာဟာအောက်ပါရရှိသောတုံ့ပြန်မှုအောင်းနေချိန်ဒေတာ
D1 နှင့် D2 အဲဒီ receptor ဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်ခြင်းများနှင့်ဖြစ်နိုင်ဖွယ်အလားအလာလျှော့
အစပိုင်းမှာဒီစမ်းသပ်မှုအတွက်ကြွက် ၁၆ ကောင်လေ့ကျင့်ခံခဲ့ရတယ်။ ခွဲစိတ်ကုသမှုအတွင်းတိရိစ္ဆာန်တစ်ကောင်သေဆုံးခဲ့ပြီးအခြားသုံးခုမှအချက်အလက်များသည်မတိကျသောနေရာချထားမှုများကြောင့်ဖယ်ရှားခံရပြီးနောက်ဆုံးရလဒ် n = ၁၂ ဖြစ်သည်။ ရွေးချယ်မှုအချက်အလက်များအားခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာလေ့လာမှုအရ D16 antagonist SCH12 ၏ Intra-PFC ပြန့်ပွားမှုသည်ကုသမှု၏အဓိကအကျိုးသက်ရောက်မှုကိုဖော်ပြသည်။ (F (1) = 23390, p = 2,22) ဒါပေမယ့်ကုသမှုကိုပိတ်ပင်တားဆီးထားခြင်းမရှိဘူး (F (3.26) = 0.05, NS) ။ SCH6,66 (0.92 μg) အမြင့်ပမာဏသည်အနိမ့်ဆုံးလုပ်ကွက်သုံးခု (p <23390; ပုံ ၃ အေ) တွင်ကြီးမားသော / အန္တရာယ်ရှိသည့်လီဗာကို ပိုမို၍ သိသိသာသာလျော့နည်းကျဆင်းစေသော်လည်း၊ အနိမ့်ဆေးပမာဏ (၀.၁ μg) သည်ရွေးချယ်နိုင်သောအပြုအမူအားယုံကြည်စိတ်ချရသောအပြောင်းအလဲမရှိခဲ့ပါ။ D1 ပိတ်ဆို့ခြင်းသည်တုန့်ပြန်မှုကြာချိန်များ (F (0.05) = 3, ns)၊ ရုံးတင်စစ်ဆေးမှုပျက်ကွက်ခြင်း (F (0.1) = 1, ns) သို့မဟုတ် locomotor counts (F (2,22) = 0.18, ns) အပေါ်အကျိုးသက်ရောက်မှုမရှိပါ။ ) ။
ဖြစ်နိုင်ခြေရှိသောလျှော့အပေါ် medial PFC အတွက် DA အဲဒီ receptor ကိုင်တွယ်၏ဆိုးကျိုးများ။ ဖြစ်နိုင်ခြေကိုပိတ်ပင်တားဆီးမှု (x- ဝင်ရိုး) ကအခမဲ့ - ရှေးခယျြမှုစမ်းသပ်မှုစဉ်အတွင်းကြီးမားသော / အန္တရာယ်ရှိသောလီဗာ၏ရာခိုင်နှုန်းရွေးချယ်မှု၏စည်းကမ်းချက်များ၌ဒေတာကိုစီစဉ်နေကြသည်။ သင်္ကေတယုတ် + SEM ကိုကိုယ်စားပြုသည်။ မီးခိုးရောင်ကြယ်များသည်သိသာထင်ရှားသောအဓိကအကျိုးသက်ရောက်မှုကိုဖော်ပြသည် (ဆားနှင့်ဆေးပြင်းအား၊ p <0.05) ။ ဖြစ်နိုင်ခြေကိုပိတ်ပင်ထားသောအဓိကအကျိုးသက်ရောက်မှုအတွင်းကုသမှုအခြေအနေများအကြားကြယ်အမည်းရောင်သည်သိသာထင်ရှားသောခြားနားချက် (p <0.05) ကိုရည်ညွှန်းသည်။ တစ် ဦး က, D1.0 antagonist SCH1 ၏ 23390 μgထိုး၏ပြုတ်ရည်အန္တရာယ်များရွေးချယ်မှုလျှော့ချခြင်း, ဖြစ်နိုင်ခြေဆိုင်ရာလျှော့အရှိန်မြှင့်။ ဆန့်ကျင်ဘက်အနေဖြင့် B သည် D1.0 ၏ anticistist eticlopride ၏2μgဆေးထိုးခြင်းအားလျှော့ချခြင်းနှင့်စွန့်စားမှုများသောရွေးချယ်မှုကိုတိုးမြှင့်ပေးခဲ့သည်။ C, D1 ၏ agonist SKF81297 သည်အန္တရာယ်နည်းသောရွေးချယ်မှုအနည်းငယ်ကိုသိသိသာသာတိုးတက်စေခဲ့သည်။ : D, အ D10 agonist quinpirole ၏2μgထိုး၏ပြုတ်ရည်ကန ဦး ပိတ်ပင်တားဆီးမှုစဉ်အတွင်းအန္တရာယ်များရွေးချယ်မှုလျော့ကျလာခြင်းနှင့်နောက်ဆုံးပိတ်ပင်တားဆီးမှုစဉ်အတွင်းရွေးချယ်မှုတိုးမြှင့်, လျှော့ဖျက်သိမ်း။
အစပိုင်းမှာဒီစမ်းသပ်မှုအတွက်ကြွက် ၁၆ ကောင်လေ့ကျင့်ခံခဲ့ရတယ်။ ခွဲစိတ်ကုသမှုအတွင်းတိရိစ္ဆာန်တစ်ကောင်သေဆုံးပြီးအခြားနေရာသုံးခုမှအချက်အလက်များသည်မတိကျသောနေရာများကြောင့်ဖျက်သိမ်းခံခဲ့ရသည်။ ရလဒ်မှာ n = ၁၂ ဖြစ်သည်။ ရွေးချယ်မှုအချက်အလက်များအားခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းသည်ဆေးကုသမှု၏အဓိကအကျိုးသက်ရောက်မှုကိုလည်းဖော်ပြခဲ့သည်။ (F (16) = 12, p <2,22) ဒါပေမယ့်ဘယ်သူမျှမကုသမှု×ပိတ်ပင်တားဆီးမှုအပြန်အလှန် (F (3.76) = 0.05, NS) ×ကုသမှု။ သို့သော် D6,66 receptor ပိတ်ဆို့ခြင်း၏ဆိုးကျိုးများနှင့်မတူဘဲ eticlopride (0.84 μg) ၏ပမာဏသည်အမြင့်ပမာဏ (p <1; ပုံ - ၃ ခ) နှင့်အနိမ့်ဆေးများ (1 μg) နှင့်အတူလုပ်ကွက်အားလုံးအနှံ့ကြီးမားသော / အန္တရာယ်များသည့်လီဗာအတွက် ပိုမို၍ ဦး စားပေးမှုတိုးလာသည်။ ) အနည်းငယ်, ဒါပေမယ့်သိသာရွေးချယ်မှုတိုးထုတ်လုပ်။ Eticlopride သည်တုန့်ပြန်မှု latency (F (0.05) = 3, ns)၊ ရုံးတင်စစ်ဆေးမှုပျက်ကွက်ခြင်း (F (0.1) = 2,22, ns) သို့မဟုတ် locomotor counts (F (0.63) = 2,22, ns) အပေါ်အကျိုးသက်ရောက်မှုမရှိပါ။ ။ ထို့ကြောင့် medial PFC အတွက် D1.45 သို့မဟုတ် D2,22 receptors ၏ပိတ်ဆို့မှုဖြစ်နိုင်ခြေအလားအလာလျှော့ချအပေါ်အရည်အသွေးဆန့်ကျင်ဘက်သက်ရောက်မှုရှိခဲ့ပါတယ်။ D0.99 receptor ၏လုပ်ဆောင်မှုကိုလျှော့ချခြင်းသည်ပိုမိုကြီးမားသော၊ မသေချာသည့်ဆုလာဘ်များလျှော့ချခြင်းကိုတိုးမြှင့်ခြင်း၊
D1 နှင့် D2 အဲဒီ receptor ဆွနှင့်ဖြစ်နိုင်ဖွယ်အလားအလာလျှော့
အစပိုင်းမှာ 14 ကြွက်ကဒီစမ်းသပ်မှုများအတွက်လေ့ကျင့်သင်ကြားပေးခဲ့သည်။ တဦးတည်းတိရိစ္ဆာန်ခွဲစိတ်နေစဉ်အတွင်းသေဆုံးနှင့်သူ၏အခြေခံရွေးချယ်မှုဒေတာတစ်တွေနောက်ဆုံးနှုတ်ဆက်ခြင်းဎ =2မှုအုပ်စု၏ကျန်၏ယုတ်အောက်တွင်ဖော်ပြထားသော 12 SDs သောကြောင့်တဦးတည်းကြွက်ကနေဒေတာတွေကိုဖယ်ထုတ်ထားခဲ့သည်။ အဆိုပါ medial PFC သို့ D1 agonist SKF81297 ၏အုပ်ချုပ်မှုပြီးနောက်ကြွက်ဒီအကျိုးသက်ရောက်မှုအရအေတှကျအားဖွငျ့ သာ. ကြီးမြတ်သည့်နှင့်အတူကုသမှုပြီးနောက်ဖြစ်ခြင်းနှင့်တကွ, ကြီးမားတဲ့ / အန္တရာယ်များလီဗာများအတွက်ဦးစားပေးတစ်ဦးအလယ်အလတ်တိုးပြသသည် D1 ရန်အားဖြင့်သွေးဆောင်ကြောင်းတစ်ခုအကျိုးသက်ရောက်မှုဆန့်ကျင်ဘက်ကိုပြသတော်မှာ အနိမ့်, 0.1 μgထိုး။ တိုက်ရိုက်သော်လည်း, ဒီသဘောထားကိုနေသော်လည်းရွေးချယ်မှုအချက်အလက်များ၏ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာကုသမှုသိသိသာသာအကျိုးသက်ရောက်မှုပိတ်ပင်တားဆီးမှုအပြန်အလှန် (ပုံ 2,22C ။ 'F (2.05) = 6,66, NS) ×သို့မဟုတ်ကုသမှု (F (0.10) 3, NS =) ထုတ်ဖေါ်မပြုခဲ့ အဆိုပါအနိမ့်ထိုးခြင်းနှင့်ဆားကုသမှုအခြေအနေများအကြားနှိုင်းယှဉ်စာရင်းအင်းအရေးပါမှုကို (p = 0.086) ဆီသို့တစ်ဦးလမ်းကြောင်းသစ်ကိုပြသပြုလေ၏။ အဆိုပါ D1 agonist လည်းတုံ့ပြန်မှု latency မသက်ရောက် (F (2,22) = 0.67, NS), ရုံးတင်စစ်ဆေးပျက်ကွက် (F (2,22) = 0.06, NS), သို့မဟုတ် locomotor အရေအတွက် (F (2,22) = 0.36, NS) ရှိခဲ့ပါတယ်။
တနည်းကား, ဒီစမ်းသပ်မှုများအတွက်ကြွက် 14 လေ့ကျင့်သင်ကြားခဲ့ကြသည်။ ကြွက်တစ်ကောင်မှအချက်အလက်များကိုလေ့ကျင့်မှု ၃၄ after ပြီးနောက်လေ့ကျင့်မှု ၃၄ discount နောက်ပိုင်းတွင်ထင်ရှားသောလျှော့စျေးကိုပြသခြင်းမရှိသောကြောင့်ကြွက်တစ်ကောင်မှအချက်အလက်များကိုဖယ်ထုတ်ခဲ့သည်။ အခြားကြွက်နှင့်ပတ်သက်သောအချက်အလက်များကိုမတိကျသောနေရာချထားမှုကြောင့်ဖယ်ထုတ်ပစ်ခဲ့သည်၊ အဆိုပါ D34 agonist quinpirole နှင့်အတူကုသမှု DA အဲဒီ receptor ရန်သူသို့မဟုတ် D12 agonist ဖြစ်စေခြင်းဖြင့်သွေးဆောင်ကြောင်းနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်ထူးခြားသောဖြစ်ခဲ့သည်ရှေးခယျြမှုတခုတခုအပေါ်မှာအကျိုးသက်ရောက်မှုသွေးဆောင်။ ရွေးချယ်မှုအချက်အလက်များအားခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းသည်အဓိကကုသမှု၏အဓိကအကျိုးသက်ရောက်မှုကိုဖော်ပြခြင်းမရှိပါ (F (2) = 1, ns), သို့သော်သိသာသောကုသမှု× block interaction (F (2,22) = 0.05, p <6,66, Dunnett's p ရှိခဲ့သည်) <2.33) ။ ရိုးရှင်းသောအဓိကအကျိုးသက်ရောက်မှုများခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းကထပ်မံဖော်ပြသည်မှာ quinpirole ၏ထိုးနည်း (0.05 μg) သည်ရွေးချယ်မှုအပေါ်အကျိုးသက်ရောက်မှုမရှိသော်လည်းမြင့်မားသောဆေး (0.05 μg) သည်လျှော့တွက်ကွေး၏သိသာထင်ရှားသော“ ပြားခြင်း” ကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။ အထူးသဖြင့်ဒီဆေးထိုးခြင်းသည် (p <1) သိသိသာသာလျော့နည်းသွားပြီးကန ဦး 10% ပိတ်ပင်တားဆီးမှုတွင်ကြီးမားသော / စွန့်စားနိုင်သောလီဗာရွေးချယ်မှုကိုလျော့နည်းစေခဲ့သော်လည်းဆားပြုတ်ခြင်းနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါကနောက်ဆုံးလုပ်ကွက် (၁၂.၅%) တွင်အန္တရာယ်ရှိသောရွေးချယ်မှုကိုတိုးမြှင့်ခဲ့သည် (ပုံ။ 0.05D) ။ ထို့အပြင်ဆား (သို့) ၁.၀ μgဆေးပမာဏကိုဆားထည့်ခြင်းသို့မဟုတ် quinpirole ဆေးထိုးခြင်းအပြီးတွင်ပိုမိုကြီးမားသောဆုလာဘ်ရရှိခြင်း၏အကျိုးကျေးဇူးများသည်အစည်းအဝေးတစ်ခုအတွင်း၌လျော့နည်းသွားသဖြင့်ကြွက်များသည်ကြီးမားသော / အန္တရာယ်ရှိသောရွေးချယ်မှုကိုသိသိသာသာလျှော့ချကြောင်းပြသခဲ့သည်။ ဆနျ့ကငျြ, ဒီ option ၏ရွေးချယ်မှုအချိုးအစား quinpirole ၏ 100 μg (p> 12.5) နဲ့ကုသမှုပြီးနောက်သိသိသာသာပြောင်းလဲရန်လုပ်ကွက်လေးခုကိုဖြတ်ပြီးမပြောင်းခဲ့ပါဘူး။ Quinpirole သည်စမ်းသပ်မှုပျက်ကွက်ခြင်း (F (3) = 1.0, ns) သို့မဟုတ် locomotor counts (F (0.005) = 10, ns) အပေါ်အကျိုးသက်ရောက်မှုမရှိခဲ့သော်လည်း၊ မြင့်မားသောပမာဏသည်သိသိသာသာမြင့်မားသောလုပ်ကွက်လေးခု (F (၃) ခုတွင်ရွေးချယ်မှုကြာချိန်ကိုမြင့်တက်စေခဲ့သည်) 0.25) = 2,22, p <0.84 နှင့် Dunnett ရဲ့, p <2,22; ဇယား 1.72) ။
ဦးဝင်း-နေဖို့ / မဆုံးရှုံး-ပြောင်းကုန်ပြီခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ
ရွေးချယ်သော D1 သို့မဟုတ် D2 receptor agonists သို့မဟုတ် antagonist တို့၏ထိုးသွင်းမှုတစ်ခုစီသည် medial PFC သို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချခြင်းအပေါ်ကွဲပြားသောသက်ရောက်မှုများဖြစ်ပေါ်စေသည်။ ဒီကုသမှုရွေးချယ်မှုပုံစံများနှင့်လျှော့အတွက်ရလဒ်ပြောင်းလဲမှုများကိုဘယ်လိုပိုမိုထိုးထွင်းသိမြင်မှုကိုရရှိရန်ကျနော်တို့ရွေးချယ်မှုအချက်အလက်များ၏ဖြည့်စွက်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာကောက်ယူ။ အထူးသဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်အပြုအမူအပြောင်းအလဲများသည်ကြီးမားသောဆုလာဘ် (Win-stay performance) သို့မဟုတ်အနှုတ်လက္ခဏာတုံ့ပြန်ချက်ဆိုင်ရာ sensitivity ကိုပြောင်းလဲခြင်းအပြီးစွန့်စားသောလီဗာကိုရွေးချယ်ရန်ဖြစ်နိုင်ခြေကိုပြောင်းလဲခြင်းကြောင့်လားဆိုတာခွဲခြားသိမြင်ရန်ရွေးချယ်မှုအားဖြင့်ရွေးချယ်ခဲ့သည်။ စွမ်းဆောင်ရည်) (Bari et al, 2009; ။ Stopper နှင့် Floresco, 2011) ။ လုပ်ငန်းခွင်အတွင်းတိရိစ္ဆာန်များ၏ရွေးချယ်မှုသည်ရှေ့ပြေးလွတ်လပ်သောရွေးချယ်မှုတစ်ခုစီ၏ရလဒ်အရခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာပြီးအချိုးအဖြစ်ဖော်ပြခဲ့သည်။ ပြီးခဲ့သည့်ရုံးတင်စစ်ဆေးမှုတွင်အန္တရာယ်ရှိသောရွေးချယ်မှုကိုရွေးချယ်ပြီးကြီးမားသောဆု (အနိုင်ရရှိ) ကိုရွေးချယ်ပြီးနောက်ကြွက်သည်ကြီးမားသော / အန္တရာယ်ရှိသောလီဗာကိုရွေးချယ်သည့်အကြိမ်အရေအတွက်မှအနိုင်ရရှိသည့်စမ်းသပ်မှုအချိုးကိုတွက်ချက်သည်။ ကြွက်ပိုကြီးတဲ့ဆုလာဘ်ရရှိသောအတွက်စမ်းသပ်မှု။ အပြန်အလှန်အားဖြင့်ဆုံးရှုံးမှုပြောင်းလဲမှုစွမ်းဆောင်ရည်သည်ကြွက်များကိုရွေးချယ်သောအကြိမ်အကြိမ်အရေအတွက်မှတွက်ချက်ပြီးရှေ့စမ်းသပ်စစ်ဆေးမှုတွင်အန္တရာယ်ရှိသောရွေးချယ်မှုကိုရွေးချယ်ပြီးသောအခါရွေးချယ်မှုကိုအသေးစား / အချို့သောလီဗာသို့ပြောင်းလဲခြင်းနှင့်အကျိုးမပေးခဲ့ခြင်း (အရှုံး) ကိုလွတ်လပ်စွာရွေးချယ်သောစမ်းသပ်မှုစုစုပေါင်းဖြင့်ခွဲခြားသည်။ ဆုံးရှုံးမှုအတွက်ရရှိလာတဲ့။
အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်လုပ်ငန်းတာဝန်များဖြစ်နိုင်ဖွယ်အလားအလာသဘောသဘာဝ, လေးခုစမ်းသပ်ချက်တစ်လွှားအနည်းဆုံး 4-5 တစ်ဦးချင်းတိရိစ္ဆာန်ကြီး / အန္တရာယ်များလီဗာကို select ဘူး (ထို့ကြောင့် "နေဖို့" နိုင်ဘူးဖြစ်စေဘယ်မှာသာဓကတစ်ခုသို့မဟုတ်အနိုင်ရရှိပြီးနောက် "ပြောင်းကုန်ပြီ" မှာရှိကြ၏ သို့မဟုတ်အရှုံး) သို့မဟုတ်တစ်အချို့ဖြစ်နိုင်ခြေပိတ်ပင်တားဆီးမှု (အထူးသဖြင့်အဆုံးစွန်နှစ်ခုလုပ်ကွက်) စဉ်အတွင်းမှာအားလုံးကြီးမားသောဆုလာဘ်ရယူခဲ့ပါဘူး။ ထို့ကြောင့်ဤရောဂါဖြစ်ပွားမှု၏တစ်ခုခုအတွက်ဤအချိုးတွက်ချက်ရန်အသုံးပြုညီမျှခြင်းအတွက်ပိုင်းခြေတစ်ပိတ်ပင်တားဆီးမှု-ဤအချက်အလက်များ၏ဘလောက်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာပို့ချကနေကျွန်တော်တို့ကို precluded သောလုပ်ကွက်အနည်းဆုံးတဘို့သုညဖြစ်ပါလိမ့်မည်။ ကျွန်တော်အရင်က (အဆို့နှင့် Floresco, 2011) ပြုမိပါပြီအတိုင်းဤကျော်လွှားရန်, ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ, လေးခုလုပ်ကွက်တစ်ဝှမ်းလုံးကိုစမ်းသပ်မှုတွေအဘို့ကောက်ယူခဲ့သည်။ Win-နေထိုင်စွမ်းဆောင်ရည်အတွက်အပြောင်းအလဲများဆုံးရှုံး-ပြောင်းကုန်ပြီစွမ်းဆောင်ရည်အတွက်အပြောင်းအလဲများကိုစမ်းသပ်မှု၏တစ်ခုလုံးကိုကြာချိန်ကျော်အနုတ်လက္ခဏာတုံ့ပြန်ချက် sensitivity ကိုတစ်ဦးအညွှန်းကိန်းအဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်သော်လည်းကြီးများ, အန္တရာယ်များဆုလာဘ်ရယူ, နောက်ဆက်တွဲရွေးချယ်မှုအပြုအမူအပေါ်ရှိခဲ့သောသက်ရောက်မှု၏အထွေထွေအညွှန်းကိန်းအဖြစ်အသုံးပြုခဲ့ကြသည် session တစ်ခု။
ဒြပ်ပေါင်းလေးမျိုးမှတစ်ခုစီသည်ရွေးချယ်မှုအပြုအမူအပေါ်ကွဲပြားသောအကျိုးသက်ရောက်မှုများဖြစ်ပေါ်စေကြောင်းကျွန်ုပ်တို့ပေးထားသောဒြပ်ပေါင်းတစ်ခုစီ၏ဆားငန်ကုသမှုနှင့်တိုက်ရိုက်နှိုင်းယှဉ်ခြင်းကိုအထူးပြုလုပ်ခဲ့သည်။ ဒီခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုအဘို့, ငါတို့တစ် ဦး ချင်းစီမူးယစ်ဆေးဝါးနှင့်သက်ဆိုင်ရာမော်တော်ယာဉ်ထိုး၏ထိရောက်သောဆေးများနှင့်ကုသမှုပြီးနောက်ရရှိသောဒေတာကိုအသုံးပြုခဲ့သည် (SKF81297 များအတွက်ကျနော်တို့နိမ့်, 0.1 μgဆေးထိုးနှင့်အတူကုသမှုပြီးနောက်ရရှိသောဒေတာ) ကိုအသုံးပြုခဲ့သည်။ Win-stay နှင့် loss-shift စမ်းသပ်မှုများကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုအရသိသာထင်ရှားသောလေးမျိုးအပြန်အလှန်စမ်းသပ်မှု (win-stay vs lost-shift) ×ကုသမှု (saline vs drug) × receptor (D1 vs D2) ×မူးယစ်ဆေးဝါးအမျိုးအစား (ဆန့်ကျင်ဘက်ဆန့်ကျင်မှု / agonist) ) (F (1,44) = 11.92, p <0.05; ။ ပုံ 4, စားပွဲတင် 2) = ။ ခြုံငုံရွေးချယ်မှုအပြုအမူအားခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာလေ့လာမှုအရမူးယစ်ဆေးဝါးတစ်ခုစီသည် Win-stay / loss- shift-tendencies အပေါ်ထူးခြားသောအကျိုးသက်ရောက်မှုများဖြစ်ပေါ်စေခြင်းကြောင့်အချက် ၄- ခုအပြန်အလှန်တုံ့ပြန်မှုကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။ win-stay စွမ်းဆောင်ရည်နှင့် ပတ်သက်၍ ထိန်းချုပ်မှုအခြေအနေများတွင်ကြွက်များသည်ယခင်စမ်းသပ်မှုတွင်ဤလီဗာကိုရွေးချယ်ပြီးဆုကိုရရှိပြီးနောက်စွန့်စားသောလီဗာကိုရွေးချယ်ရန် (၈၀ မှ ၉၀% အတွင်း) ပြင်းထန်သောစိတ်သဘောထားကိုပြခဲ့သည် (Stopper and Floresco) , 80) ။ အပြန်အလှန်အားဖြင့်တိရိစ္ဆာန်များသည်စမ်းသပ်မှုများ၏ ∼90-2011% အပေါ်ထိန်းချုပ်မှုအခြေအနေများအောက်တွင်ကြီးမားသော / စွန့်စားနိုင်သောလီဗာကိုရွေးချယ်ပြီးနောက်“ ဆုံးရှုံးမှု” ပြီးနောက်တိရစ္ဆာန်များ / အချို့သောလီဗာသို့ပြောင်းလဲလေ့ရှိသည်။
Win-နေ (မီးခိုးရောင်ဘား) ရက်နေ့တွင် PFC DA အဲဒီ receptor ထိန်းသိမ်းရေး၏ဆိုးကျိုးများနှင့်ဆုံးရှုံး-ပြောင်းကုန်ပြီ (အဖြူဘား) သဘောထားတွေ။ ရှင်းလင်းပြတ်သားခြင်းနှင့်နှိုင်းယှဉ်ရည်ရွယ်ချက်များအဘို့, data ကိုဆားကုသမှု (အပြုသဘောတန်ဖိုးများတာဟာထိန်းချုပ်ဖို့မူးယစ်ဆေးကုသမှုဆွေမျိုးပြီးနောက်တစ်ခုတိုးလာအချိုး, အနုတ်လက္ခဏာတန်ဖိုးများကျဆင်းညွှန်ပြ) သာရှိပြီးပြည်ပမှမူးယစ်ဆေးအပေါ်ရရှိသောအချိုးအကြားခြားနားချက်ရမှတ်၏စည်းကမ်းချက်များ၌ကဒီမှာတင်ဆက်ထားပါသည်။ ဤအတန်ဖိုးများကိုရယူခဲ့ပြီးသောအနေဖြင့်ခြုံငုံခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာများတွင်အသုံးပြုကုန်ကြမ်းဒေတာစားပွဲတင်2အတွက်တင်ပြနေကြပါတယ်။ ဦးဝင်း-နေထိုင်အချိုးအညွှန်းကိန်းကြွက်ယခင်တရားခွင်ပေါ်ပိုကြီးတဲ့ဆုလာဘ်ကိုလက်ခံရရှိပြီးနောက်ကြီးမားသော / အန္တရာယ်များလီဗာကို ရွေးချယ်. အရာများအတွက်စမ်းသပ်မှုတွေ၏အချိုးအစား။ အချိုးအညွှန်းကိန်းကြွက်ကြီး / အန္တရာယ်များလီဗာ၏ unrewarded ရွေးချယ်မှုအောက်ပါငယ် / အခြို့သောလီဗာဖို့ရှေးခယျြမှုပြောင်းလဲပေးသောအဘို့အစမ်းသပ်မှုတွေ၏အချိုးအစား-ပြောင်းကုန်ပြီရှုံးသည်။ ကြယ် 0.05 အဆင့်မှာဆားကနေသိသိသာသာခြားနားချက်ဖျောညှနျး။ သိသာထင်ရှားသောမဟုတ် NS ။
ဆား၏ပြုတ်ရည်များနှင့် D1 နှင့် D2 ရန်သို့မဟုတ် agonists ၏အမြင့်ဆုံးသို့မဟုတ်အထိရောက်ဆုံးဆေးထိုးပြီးနောက်ဖြစ်နိုင်ဖွယ်အလားအလာလျှော့တာဝန်ဖျော်ဖြေကြွက်အဘို့အဦးဝင်း-နေဖို့ / မဆုံးရှုံး-ပြောင်းကုန်ပြီအချိုး
လေးလမ်းသွားအပြန်အလှန်၏ရိုးရှင်းသောအဓိကသက်ရောက်မှုများကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာလေ့လာမှုအရ D1 antagonist SCH23390 သည် win-stay စွမ်းဆောင်ရည်ကိုအကျိုးသက်ရောက်စေနိုင်ခြင်းမရှိသော်လည်းဆုံးရှုံးမှုပြောင်းလဲမှုလမ်းကြောင်းများ (Dunnett's, p <0.05) ကဤကုသမှုကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာသောစွန့်စားနိုင်သောရွေးချယ်မှုများလျော့နည်းသွားသည်ဟုဖော်ပြသည်။ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအားဖြင့်အနှုတ်လက္ခဏာတုံ့ပြန်ချက်များ (ဥပမာ - ဆုချထားခြင်းမရှိခြင်း) ကိုပိုမိုသိရှိလွယ်သောကြောင့်ဖြစ်နိုင်သည်။ ဆန့်ကျင်ဘက်အားဖြင့်, eticlopride (2 μg) နှင့်အတူ D1 ပိတ်ဆို့မှုသိသိသာသာဆုံးရှုံး - ပြောင်းလဲမှုသဘောထားတွေအတွက်သိသိသာသာကျဆင်းခြင်းဖြစ်ပေါ်စေခြင်းငှါ, တစ် ဦး "အနိုင်ရ" (p <0.05) အောက်ပါအန္တရာယ်များ option ကိုရွေးချယ်ခြင်း၏ဖြစ်နိုင်ခြေကိုတိုးမြှင့်ခဲ့သည်။ ထို့ကြောင့် D2 ပိတ်ဆို့မှုကြောင့်သွေးဆောင်စွန့်စားသောရွေးချယ်မှုများတိုးလာခြင်းသည်အဓိကအားဖြင့်နောက်ဆက်တွဲရွေးချယ်မှုအပေါ်ကြီးမားသောဆုလာဘ်ရရှိခြင်း၏အကျိုးသက်ရောက်မှုကြောင့်ဖြစ်ပုံရသည်။
D1 ၏ agonist SKF81297 (0.1 μg) သည်ဆား (p <0.05) နှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင် win-stay စွမ်းဆောင်ရည်ကိုသိသိသာသာတိုးတက်စေသော်လည်း SCH23390 ၏ဆန့်ကျင်ဘက်အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိခြင်းကြောင့်ကြီးမားသော / စွန့်စားနိုင်သောလီဗာမှဆုံးရှုံးမှုပြီးနောက်ရွှေ့ပြောင်းနိုင်မှုကိုလျှော့ချပေးသည် (p <0.05) ။ ဆန့်ကျင်ဘက်အနေဖြင့် quinpirole (10 μg) သည် D1 agonist ၏ဆန့်ကျင်ဘက်အကျိုးသက်ရောက်မှုကို Win-stay tendencies အပေါ်ဆန့်ကျင်ဘက်အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိစေပြီး၊ “ win” ပြီးနောက်ကြီးမားသော / အန္တရာယ်များသည့်လီဗာကိုရွေးချယ်ခြင်း၏ဖြစ်နိုင်ခြေကိုသိသိသာသာလျော့နည်းစေသည်၊ ပိုကြီးပေမယ့်မသေချာမရေရာသောဆုလာဘ်၏။ ဒီကုသမှုဆုံးရှုံး - နေထိုင်အချိုးမသိသိသာသာအကျိုးသက်ရောက်မှုရှိခဲ့ပါတယ်။ ဤရွေ့ကားတွေ့ရှိချက် D0.05 vs D1 အဲဒီ receptor မော်ဂျူပိုကြီးတဲ့ဆုလာဘ်သို့မဟုတ်အနုတ်လက္ခဏာတုံ့ပြန်ချက် sensitivity ကိုရယူဖြစ်စေ၏သက်ရောက်မှုအတွက်ကွဲပြားသောအပြောင်းအလဲများအားဖြင့်သွင်ပြင်လက္ခဏာခံရဖို့ပေါ်လာကြောင်းရွေးချယ်မှုစွမ်းဆောင်ရည်အတွက် differential ကိုအပြောင်းအလဲများကိုဖြစ်ပေါ်သည်ညွှန်ပြ။
D1 receptors ဒါမှမဟုတ်လျှော့တာဝန်အချို့ရုံးတင်စစ်ဆေးလုပ်ကွက်အတွင်းပိုကြီးတဲ့, မရေမရာအကျိုးသည် preference ကိုလျှော့ချ D2 receptors ၏ဆွ၏ပိတ်ဆို့ထားခြင်း။ ဤအသက်ရောက်မှုကွဲပြားခြားနားသောပြင်းအား၏ဆုလာဘ်များအကြားတှေးထဲမှာယေဘုယျအားနှောင့်အယှက်မှအကျိုးဆက်ဖြစ်ခဲ့ကြသည်ရှိမရှိအကဲဖြတ်ဖို့ကျနော်တို့ကြွက်နှစ်ခုသီးခြားအဖွဲ့များကိုတစ်ဦးရိုးရှင်းတဲ့လုပ်ငန်းတာဝန်အပေါ်လေ့ကျင့်သင်ကြားရာဌာန၏အခြားစမ်းသပ်မှု, ပြုလုပ်ခဲ့သည်။ ကြွက်နှစ်ဦးစလုံး 100% ဖြစ်နိုင်ခြေအတူဖြစ်စေတစ်ဦးသို့မဟုတ်လေးလုံးလေးများကယ်နှုတ်တော်မူ၏နှစ်ခုခရိုနီများအကြားရွေးချယ်ခဲ့သည်။ တဆယ်ကြွက်မြင့် SCH11 ၏ထိုး (23390 μg) သို့မဟုတ် quinpirole (1 μg) နှင့်ဆား၏ counterbalanced microinfusions လက်ခံရရှိမတိုင်မီဒီတာဝန်အပေါ် 10 ဃများအတွက်လေ့ကျင့်သင်ကြားပေးခဲ့သည်။ တဦးတည်းတိရစ္ဆာန်အများအတွက်ဒေတာ quinpirole အုပ်စုတစ်စုအတွက် SCH6 အုပ်စုတစ်စုနှင့် 23390 အတွက် 8 ၏နောက်ဆုံးဎထွက်ခွာမှုကြောင့်တစ်ဦးတိနေရာချထားဖို့ဖယ်ရှားခံခဲ့ရသည်။
ဆားထည့်သွင်းမှုအပြီးတွင်ကြွက်များသည်ပိုမိုကြီးမားသောဆုလာဘ်ဆီသို့ပြင်းပြင်းထန်ထန်ဘက်လိုက်မှုကိုပြသခဲ့ပြီးစမ်းသပ်မှုများ၏ ၁၀၀% နီးပါးတွင်ဤရွေးချယ်မှုကိုရွေးချယ်ခဲ့သည် (ပုံ - ၅ က) ။ SCH100 (5 μg) ၏ပြုတ်ရည်များကိုအောက်ပါလေးလုံးပါသည့် option ကို (F (23390) = 1, ns) ဆီသို့ ဦး စားပေးပြောင်းလဲခြင်းမရှိခဲ့ပါ။ ရွေးချယ်မှုနှင့်မတူဘဲကျွန်ုပ်တို့သည် D1,5 ပိတ်ဆို့ခြင်း (ဆား = ၀.၈၁ - ၀.၁၁ s၊ SCH1.72 = ၀.၉၈ - ၀.၁ ့; အက်ဖ် (၁)) = ၇.၁၈၊ p <၀.၀၅) တွင်တုန့်ပြန်မှုနှေးကွေးမှုအနည်းငယ်တိုးတက်ခဲ့သည်။ Locomotor လှုပ်ရှားမှု (F (1) = 0.81, NS) နှင့်ရုံးတင်စစ်ဆေးပျက်ကွက် (F (0.1) = 23390, NS) SCH0.98 အားဖြင့်ထိခိုက်ခဲ့ကြသည်။ ထို့ကြောင့် SCH0.1 ၏ဤထိုးသွင်းမှုသည်ဖြစ်နိုင်ချေရှိသောလျှော့ချသည့်လုပ်ငန်းစဉ်အတွင်းပိုမိုကြီးမားသောဆုလာဘ်ရွေးချယ်မှုကိုရွေးချယ်ခြင်းကိုလျှော့ချသော်လည်းဤအကျိုးသက်ရောက်မှုသည်ပိုမိုကြီးမားသောဆုလာဘ်များ၏ပုဂ္ဂလဒိof္တန်ဖိုးအားယေဘုယျအားဖြင့်လျှော့ချခြင်းကြောင့်ဟုမထင်ရ။
ဆုလာဘ်ပြင်းအားခွဲခြားဆက်ဆံမှုအပေါ် medial PFC အတွက် DA အဲဒီ receptor မော်ဂျူ၏ဆိုးကျိုးများ။ ကြွက်များချက်ချင်း 100% ဖြစ်နိုင်ခြေနှင့်အတူတစ်ခုတည်းစာနယ်ဇင်းပြီးနောက်ဖြစ်စေတစ်ဦး four- သို့မဟုတ်တတောင့်ဆုလာဘ်ကိုအပ်နှစ်ခုခရိုနီများအကြားရွေးချယ်ဖို့လေ့ကျင့်သင်ကြားပေးခဲ့သည်။ တစ်ဦးက, D1 ပိတ်ဆို့ထားခြင်း (SCH23390, 1 μg) သိသိသာသာဆားကုသမှုဆွေမျိုးအခမဲ့-ရွေးချယ်မှုစမ်းသပ်မှုတွေစဉ်အတွင်းပိုကြီးလေးတောင့်ဆုလာဘ်များအတွက် preference ကိုနှောင့်အယှက်မပေးခဲ့ပါဘူး။ B က, D2 အဲဒီ receptor ဆွ (quinpirole, 10 μg) ကိုလည်းကြီးမားသောအကျိုးသည် preference ကိုပြောင်းလဲပစ်မပေးခဲ့ပါဘူး။
D2 အဲဒီ receptor ဆွ
quinpirole ၏ဆေးပမာဏမြင့်မားသောထိုးဆေး (10 μg) ကိုလက်ခံသောကြွက်များအား medial PFC သို့အလားတူရွေးချယ်ခြင်းပုံစံကိုလေ့လာတွေ့ရှိရသည်။ တနည်းကား, ကြွက်ဆားထိုးသွင်းပြီးနောက်အားလုံးရွေးချယ်မှုအားလုံးနီးပါးအပေါ်လေး pellet option ကိုရွေးချယ်ခဲ့သည်။ ဤသည် preference ကို D2 receptors (F (1,6) = 0.53, NS; ။ ပုံ 5B = ဆ) အားဖြင့်ပြောင်းလဲမခံခဲ့ရပါဘူး။ Quinpirole သည်လည်းကြာရှည်ခြင်း၊ ရွေ့လျားခြင်း (သို့) ပျက်ကွက်ခြင်း (F တန်ဖိုးအားလုံး <1.76, ns) အပေါ်တွင်လည်းသိသာထင်ရှားသောသက်ရောက်မှုမရှိပါ။ အလားတူကုသမှုများကပထမ၊ ၁၀၀% ဖြစ်နိုင်ခြေပိတ်ပင်တားဆီးမှုကာလအတွင်းဖြစ်နိုင်ချေရှိသောလျှော့စျေးအတွက်ပိုမိုကြီးမားသောအကျိုးကိုရွေးချယ်ခြင်းကိုလျှော့ချခဲ့သည်ကိုသတိပြုပါ။ ဤခြားနားချက်အတွက်ဖြစ်နိုင်ချေရှိသောရှင်းပြချက်မှာကြီးမားသောခွဲခြားဆက်ဆံမှုကိုလေ့ကျင့်ထားသောကြွက်များနှင့်မတူဘဲလျှော့စျေးလုပ်ငန်းတွင်လေ့ကျင့်သင်ကြားသူများသည်ကြီးမားသော / အန္တရာယ်များသောရွေးချယ်မှု၏ဆွေမျိုးအသုံး ၀ င်မှုသည် session တစ်ခုအတွင်းလျော့ကျသွားသည်ကိုသိရှိခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့်သူတို့၏ကြီးမားသောဆုလာဘ်ရွေးချယ်မှု၏နှိုင်းယှဉ်တန်ဖိုးကိုသူတို့၏ကိုယ်စားပြုမှုသည်ပိုမိုရိုးရှင်းသောလုပ်ငန်း၌လေ့ကျင့်ထားသောကြွက်များထက်ပိုမိုပျော့ပျောင်းပြီး၊ ထို့ကြောင့်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေနိုင်သည်။ စုပေါင်း၍ ဤစမ်းသပ်မှု၏ရလဒ်များအရ D100 receptors အားပိတ်ဆို့ခြင်းနှင့် D3 receptors များ၏လှုံ့ဆော်မှုသည်သေးငယ်သော၊ ကြီးမားသောဖြစ်နိုင်ခြေရှိသောဆုလာဘ်များအကြားရွေးချယ်မှုများကိုများစွာပြောင်းလဲစေသော်လည်းထိုသက်ရောက်မှုများကိုခွဲခြားနိုင်စွမ်းတွင်ပိုမိုအခြေခံကျသောချို့ယွင်းမှုများကြောင့်ဖြစ်ပုံရသည်။ ပိုကြီးပြီးသေးငယ်တဲ့ဆုလာဘ်အကြား။
ဤတွင်ကျနော်တို့က medial PFC အတွက် D1 နှင့် D2 receptors အချို့ဆုလာဘ်နှိုင်းယှဉ်ဖြစ်နိုင်ဖွယ်အလားအလာများအကြားရွေးချယ်မှုအပေါ်အရေးပါသောသြဇာလွှမ်းမိုးမှုကွိုးစားအားထုကသတင်းပို့သည်။ ထို့ပြင်ဤ receptors ၏တစ်ဦးချင်းစီ၏လှုပ်ရှားမှုလျော့ကျလာသို့မဟုတ်တိုးမြှင့်သူတို့တစ်ဦးချင်းစီသည်ဤဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်လုပ်ငန်းစဉ်များအပေါ်ကွဲပြားသော်လည်း, ဖြည့်စွတ် modulatory ထိန်းချုပ်မှုကွိုးစားအားထုကြောင်းအကြံပြု, ဆန့်ကျင်ဘက်တခါတရံရွေးချယ်မှုအတွက်အပြောင်းအလဲများကိုအသီးသီးထုတ်လုပ်နှင့်။
D1 / D2 အဲဒီ receptor ပိတ်ဆို့ထားခြင်း၏ဆိုးကျိုးများ
ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသိပညာစေရန်, ဒီ medial PFC အတွက် D1 သို့မဟုတ် D2 အဲဒီ receptor ၏ပိတ်ဆို့အပြုအမူအပေါ်ဆန့်ကျင်သက်ရောက်မှု induces သောပထမဦးဆုံးဆန္ဒပြပွဲဖြစ်ပါတယ်။ (; Seaman et al, 1; ။ ။ Granon et al,2ဝီလျံနှင့် Goldman-Rakic, 1995) သို့မဟုတ်နှစ်ဦးစလုံးသောဤမျိုး၏ယခင်လေ့လာမှုများ D1998, ဒါပေမယ့်မရ D2000, ဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်ခြင်းကဲ့သို့သောအာရုံစူးစိုက်မှုသို့မဟုတ်အလုပ်လုပ်ကိုင်မှတ်ဉာဏ်အဖြစ်လုပ်ဆောင်ချက်များကို disrupts ကြောင့်လည်းကောင်းထင်ရှားပါပြီ receptors ကွာ conditional ပြစ်ဒဏ် (; Floresco နှင့် Magyar, 2002 Ragozzino, 2006) မှ set-ပုံစံအပြောင်းအလဲလုပ်သို့မဟုတ်ဘက်လိုက်မှုအပြုအမူအဆင်ပြေချောမွေ့စေရန်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရန်။ SCH23390 နှင့် eticlopride ရွေးချယ်မှုအပေါ်ဆန့်ကျင်ဘက်ဆိုးကျိုးများသွေးဆောင်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့၏တွေ့ရှိချက်ပုံမှန်ဆုံးဖြတ်ချက်ချတိုကျရိုကျပေါ်၌ရှိသောအမြှေး D1 နှင့် D2 အဲဒီ receptor လှုပ်ရှားမှု၏အရေးပါသောချိန်ခွင်လျှာအပေါ်မှီခိုဖြစ်ပါသည်, ဤချိန်ခွင်လျှာပြောင်းလဲအချို့သော / မသေချာမရေရာဆုလာဘ်၏ရွေးချယ်မှုအတွက် dissociable အပြောင်းအလဲများကို induces ကြောင်းကိုအကြံပြုအပ်ပါသည်။
PFC D1 ပိတ်ဆို့နေတဲ့ထိုး-မှီခိုထုံးစံ၌ကြီး / အန္တရာယ်များ option ကိုများအတွက် preference ကိုယုတ်လျော့, အထင်ရှားဆုံးကနောက်ဆုံးသုံးဖြစ်နိုင်ခြေလုပ်ကွက်ကာလအတွင်း။ SCH23390 (စိန့်Öngeနှင့် Floresco, 2009) စနစ်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရသောအခါဒီဒြပ်ပေါင်းများ၏သက်ရောက်မှုပုံနဲ့တူတဲ့, ဖြစ်နိုင်ဖွယ်အလားအလာလျှော့တိုးတက်လာခဲ့သည်။ စိတ်ဝင်စားစရာ tyrosine လျော့ကျနေတဆင့်လူ့ဘာသာရပ်များအတွက် DA ဂီယာလျှော့ချလည်းကင်းဘရစ်လောင်းကစား Task ကို (McLean et al ။ , 2004) ရက်နေ့မှာအောင်ဖို့ပိုရှေးရိုးစွဲနဲ့ဆင်းရဲတဲ့အရည်အသွေးကိုဆုံးဖြတ်ချက်စေပါတယ်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ရလဒ်များကိုသည်ဤဆိုးကျိုးများလျှော့ prefrontal D1 activation နေဖြင့်အစိတ်အပိုင်းတစ်ရပ်အတွက်ကမကထပြုခဲ့စေခြင်းငှါအကြံပြုအပ်ပါသည်။ နောက်ထပ်ရွေးချယ်မှုက-by-ရွေးချယ်မှုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာဆုံးဖြတ်ချက်ချအပေါ်သက်ရောက်မှုတိုးလာ၏ရလဒ်ဖြစ်မည်အကြောင်းအကြံပြုသည်အန္တရာယ်များ option ကိုအဘို့ဤလျှော့ preference ကို non-ဆုခခြံအန္တရာယ်များရွေးချယ်မှုအောက်ပါငယ် / အခြို့သော option ကိုရွေးချယ်ဖို့တစ်ခုတိုးလာသဘောထားကိုချိတ်ဆက်ခဲ့ကွောငျးဖျောပွထားပါ အနုတ်လက္ခဏာတုံ့ပြန်ချက်မှ sensitivity ကို။ သူတို့တစ်ခုခု (။ လာကြောင်းတွေ့ဆုံမေးမြန်းထားပါတယ် et al 1) နှောင့်နှေးတစ်ခုသို့မဟုတ် သာ. ကြီးမြတ်အားထုတ်မှုကုန်ကျစရိတ် (Schweimer နှင့် Hauber, 2010) နဲ့ဆက်စပ်သည့်အခါတစ်ဦးနှင့်ဆင်တူသွေးကြောထဲမှာ, prelimbic သို့မဟုတ် anterior cingulate အတွက် D2006 receptors ၏ပိတ်ဆို့ပိုကြီးတဲ့ဆုလာဘ်များအတွက် preference ကိုလျော့ကျစေပါတယ်။ စုပေါင်းဤတွေ့ရှိချက် PFC D1 အချက်ပြရေရှည်အကျိုးအမြတ်တိုးမြှင့်ဖို့ကြိုးပမ်းအတွက်ပိုကြီးတဲ့ဆုလာဘ်နဲ့ဆက်စပ်စေခြင်းငှါကုန်ကျစရိတ်ကိုကျော်လွှားနိုင်စွမ်းဆောင်ရွက်မှုတွေ, ကုန်ကျစရိတ် / အကျိုးအတွက်အကဲဖြတ်အပေါ်တစ်ဦးလေးနက်သြဇာလွှမ်းမိုးမှုရအခက်အကြံပြုအပ်ပါသည်။
ကာလတုန်းကမရခဲ့ဘူးမတူဘဲ, PFC D2 အဲဒီ receptor ပိတ်ဆို့ဆုလာဘ်ဖြစ်နိုင်ခြေတစ် session တစ်ခုကျော်လျော့နည်းသွားအဖြစ်ရွေးချယ်မှုဘက်လိုက်မှုအတွက်ပြောင်းကုန်ပြီနှေးကွေးခြင်း, ကြီးမား / အန္တရာယ်များ option ကိုများအတွက် preference ကိုတိုးမြှင့်ခဲ့သည်။ အထူးသ, ဒီအကျိုးသက်ရောက်မှုအလားတူလုပ်ငန်းတာဝန်အခြေအနေများ (စိန့်Öngeနှင့် Floresco, 2010) အရ PFC inactivation အားဖြင့်သွေးဆောင်ကြောင့်ဆင်တူပါသည်။ သို့သျောလညျးကြှနျုပျတို့သညျဤနှုန်း se "အန္တရာယ်များ" အပြုအမူအတွက်အထွေထွေတိုးထင်ဟပ်မယုံကြည်ကြဘူး။ အဲဒီအစားကျွန်တော်တို့ရဲ့ယခင်တွေ့ရှိချက် medial PFC အညီအပြုအမူကိုထိန်းညှိဖို့ဆုလာဘ်ဖြစ်နိုင်ခြေပြောင်းလဲမှုများစောင့်ကြည့်နေတဲ့အရေးပါသောအခန်းကဏ္ဍကောက်ချက်ချဖို့ကျွန်တော်တို့ကိုဦးဆောင်ခဲ့သည်။ ပစ္စုပ္ပန်ရလဒ်များကို D2 receptors ဆုံးဖြတ်ချက်ချဤကဏ်ဍ၏ PFC စည်းမျဉ်းတစ်ခုမရှိမဖြစ်လိုအပ်အလှူငွေစေထုတ်ဖော်, ဒီအပေါ်ကိုချဲ့ထွင်။ အန္တရာယ်များရွေးချယ်မှု၌ဤသိသာတိုးရှေ့ရုံးတင်စစ်ဆေးအပေါ်ကြီးမားတဲ့ဆုလာဘ်ရယူပြီးနောက်အန္တရာယ်များ option ကိုရွေးဖို့တစ်ခုတိုးလာသဘောထားကိုအားဖြင့်ပိုပြီးအဓိကမောင်းနှင်ခဲ့သည်။ ထို့ကြောင့်မဟုတ်ဘဲမျိုးစုံစမ်းသပ်မှုတွေဖြတ်ပြီးပိုကြီးတဲ့ဆုလာဘ်ရယူများ၏ဖြစ်နိုင်ခြေအကြောင်းသတင်းအချက်အလက်ပေါင်းစပ်ခြင်းထက်, D2 ပိတ်ဆို့နောက်ဆက်တွဲရွေးချယ်မှု၏ညှနျကွားအပေါ်တစ်ဦး သာ. ကြီးမြတ်ချက်ချင်းသက်ရောက်မှုကွိုးစားအားထုဖို့ပိုကြီးတဲ့ဆုလာဘ်လက်ခံရရှိစေ၏။ ဤသည် D2 ဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်ခြင်းပိုမိုမြင့်မားဆုလာဘ်ဖြစ်နိုင်ခြေများနှင့် ventromedial PFC လှုပ်ရှားမှုအတွက်သက်ဆိုင်ရာအပြောင်းအလဲများနှင့်ဆက်စပ်ရွေးချယ်စရာနှစ်ခုလုံးကိုရှေးခယျြမှုတိုးပွားလာသောလူသားတစ်ဦးမကြာသေးခင်ကလေ့လာမှုနှင့်အတူစောင့်ရှောက်ခြင်း၌တည်ရှိ၏ (Jocham et al ။ , 2011) ။ စုပေါင်းဤတွေ့ရှိချက် PFC D1 နှင့် D2 receptors ဆုံးဖြတ်ချက်ချရန်ကွဲပြားသော်လည်း, ဖြည့်စွတ်ပံ့ပိုးမှုများကိုဖွဲ့စည်းကြောင်းပြသပါ။ D1 receptors များ၏ဖြစ်နိုင်ခြေသည်ဤဆုလာဘ်ရယူတဲ့အခါမှာရေရှည်ကျော်အပြုအမူကိုထိန်းညှိဖို့စွမ်းရည်ဆောင်ရွက်မှုတွေ, ပိုကြီးတဲ့, ဖြစ်နိုင်ဖွယ်အလားအလာဆုလာဘ်ရွေးချယ်မှုဘက်လိုက်မှုအပေါ်ကွိုးစားအားထုတျသောချက်ချင်းသက်ရောက်မှုလျော့ပါးသော်လည်း D2 အဲဒီ receptor လှုပ်ရှားမှု, ပိုကြီးတဲ့အမျိုးအစားရွေးချယ်မှုဖြစ်သော်လည်း, မသေချာမရေရာသို့မဟုတ်ထိုထက်ပိုအကုန်အကျဆုလာဘ်ကိုအားပေးအားမြှောက် အပြောင်းအလဲများကို။
D1 / D2 အဲဒီ receptor ဆွ၏ဆိုးကျိုးများ
ဤအကုသအနည်းငယ်ကြီးမားသောအဘို့အ preference ကိုတိုးမြှင့်သော်လည်း D1 အဲဒီ receptor agonist SKF81297 ၏အချင်းချင်းအပြန်အလှန် PFC တာဟာ, (မှတ်ဉာဏ်အလုပ်လုပ်ကိုင်, အာရုံစူးစိုက်မှု) သိမှတ်ခံစားမှု၏အခြားပုံစံများအပေါ် differential ကိုသက်ရောက်မှုကွိုးစားအားထုပြခဲ့ကြကြောင်းထိုးပ္ပံအတွင်းမှာသိသိသာသာ / အန္တရာယ်များရွေးချယ်မှုပြောင်းလဲပစ်ဘူး အထင်ရှားဆုံးနိမ့်ထိုးနှင့်အတူအန္တရာယ်များလီဗာ,။ ဤအ Non-monotonic ထိုး / တုံ့ပြန်မှုအကျိုးသက်ရောက်မှုများ SKF81297 ကအခြားသိမြင်မှုလုပ်ငန်းဆောင်တာများအတွက်ဖြစ်နိုင်သည်ထက်ကျဉ်းကြောင်းထိရောက်သောထိုးအကွာအဝေးရှိစေခြင်းငှါအကြံပြုအတိုင်းဤတရားမဝင်သောအကျိုးသက်ရောက်မှု၏အနက်ကို, သတိနဲ့ချဉ်းကပ်ရပါမည်။ ထို့အပြင် 0.1 μgထိုးသိသိသာသာကြွက်ဆုလာဘ်များနှင့်ဆုလာဘ်ပျက်ကွက်နှစ်ဦးစလုံးသည်အောက်ပါကြီး / အန္တရာယ်များလီဗာရွေးချယ်ဖို့ကပိုဖွယ်ရှိခဲ့ကြသည်ရှိရာ, Win-နေထိုင်စွမ်းဆောင်ရည်တိုးမြှင့်ခြင်းနှင့်ဆုံးရှုံး-ပြောင်းကုန်ပြီသဘောထားတွေကိုလျော့ကျလာ, ရှေးခယျြမှုပုံစံများပြောင်းလဲခဲ့ပေ။ မည်သို့ပင်ဆိုစေ SKF81297 ၏တိုးပွားလာဆေးများသိသိသာသာရွေးချယ်မှုပြောင်းလဲပစ်ဘူးဆိုတဲ့အချက်ကို PFC D1 receptors ၏ supranormal ဆွသိသိသာသာအန္တရာယ်များနှင့်ဆုလာဘ်အကြောင်းကိုဆုံးဖြတ်ချက်ချနှင့်အတူဝင်ရောက်စွက်ဖက်မထားဘူးကြောင်းဖော်ပြသည်။ ဆနျ့ကငျြအလားတူကုသပိုကြီးတဲ့, နှောင့်နှေးဆုလာဘ်၏ရှေးခယျြမှုလျော့ကျ (လာကြောင်းတွေ့ဆုံမေးမြန်းထားပါတယ် et al ။ , 2010), ကုန်ကျစရိတ် / အကျိုးအတွက်ဆုံးဖြတ်ချက်ချအမျိုးမျိုး pharmacologically dissociated နိုင်ထပ်မံထောက်ပံ့ပေးခြင်း။
အဆိုပါ D2 agonist quinpirole သိသိသာသာဆုလာဘ်ဖြစ်နိုင်ခြေပြောင်းလဲမှုများအပေါ်သို့ဝမျှသဘောပြသကြွက်နှင့်တကွ, အထူးလျှော့စျေးကွေး flattening, ဆုံးဖြတ်ချက်ချအတွက်စစ်မှန်သော "ချွတ်ယွင်း" သွေးဆောင်။ လေးတောင့် option ကိုရွေးချယ်ခြင်း (ကအများဆုံးအကျိုးရှိအခါ) ကို 100% ပိတ်ပင်တားဆီးမှုအတွက်လျှော့ချ, ဒါပေမယ့် (ကအနည်းဆုံးအကျိုးရှိအခါ) ကို 12.5% ပိတ်ပင်တားဆီးမှုအတွက်တိုးမြှင့်ခဲ့သည်။ D2 ဆွပြီးတဲ့နောက်ကြီးမားတဲ့ / အန္တရာယ်များရွေးချယ်မှု၏ခြုံငုံအချိုးအစားဆား (~73%) မှဆွေမျိုးမပြောင်းခဲ့ပါဘူး, ဒါပေမယ့်တိရိစ္ဆာန်များသည်ဤဖြစ်နိုင်ခြေပြောင်းလဲမှုများဖို့လုံးဝအာရုံမခံစားနိုင်သောခဲ့ကြသည်။ ပြင်းထန်စွာပုံကြီး / အန္တရာယ်များလီဗာဆီသို့တစ်ဘက်လိုက်မှုထိန်းသိမ်းခြင်းအနေဖြင့်ကြွက်များလုပ်ကွက်ကိုဖြတ်ပြီးတဲ့ရိုးရှင်းတဲ့ Alternative မဟာဗျူဟာသုံးစွဲဖို့ဖြစ်ပေါ်စေရွေးချယ်မှုထိန်းညှိဖို့စွမ်းရည်နှင့်အတူဝငျရောကျစှကျထို့ကြောင့်အလွန်အကျွံ D2 အဲဒီ receptor activation ။ eticlopride ၏သက်ရောက်မှုနှင့်အတူပေါင်းစပ်၌ဤတွေ့ရှိချက်, အဆိုပါ medial PFC အတွက်အဲဒီ receptor သေံဆုံးဖြတ်ချက်ချ၏ဤရှုထောင့်အပေါ်ဝေဖန်သက်ရောက်မှုရှိပါတယ်, ဤလှုပ်ရှားမှုကိုတိုးမြှင့်သို့မဟုတ်လျော့ကျလာဖြစ်စေစွမ်းဆောင်ရည်နှင့်အတူဝင်ရောက်စွက်ဖက်နိုင်ပါတယ် (အစား D2 ထက်) D1 ၏ဆွေမျိုးအဆင့်ဆင့်ကအကြံပြုထားသည်.
quinpirole ထုတ်လုပ်အားနည်းချက်များကိုရွေးချယ်မှုပုံစံကိုရေရှည်အခမဲ့-နို့တိုက်ကျွေးမှု (စိန့်Öngeနှင့် Floresco, 2009) မှတဆင့်စားစရာဘို့လှုံ့ဆျောမှုလျှော့ချခြင်းဖြင့်သွေးဆောင်ကြောင်းတစ်ဒီကဗျာအကြံအစည်ဖြင့်သမုတ်သော။ ဤရွေ့ကားဖြည့်စွတ်တွေ့ရှိချက်သူတို့ဖြစ်ရပ်နှင့်ဆက်နွယ်စေခြင်းငှါမှနျးဖို့ကသွေးဆောင်ပါစေ။ အမှန်စင်စစ် medial PFC DA efflux ပြောင်းလဲမှုများတစ်ယေဘူယျအစားအစာဆုလာဘ်သို့မဟုတ်မက်လုံးပေးစိတ်ခွန်အားနိုး signal ကိုရောင်ပြန်ဟပ်ဖို့အဆိုပြုခဲ့ကြ (Ahn နှင့် Phillips က, 1999; Winstanley et al, 2006 ။ ) ။ ထို့ကြောင့်အချိန်ကျော်ရရှိသောဆုလာဘ်ပမာဏကိုပြောင်းလဲမှုများ D2 receptors အပေါ်လုပ်ရပ်တွေကနေတဆင့်, အချိန်ကျော်ရရှိသောဆုလာဘ်ပမာဏကိုပြောင်းလဲမှုများ detect နှင့်မြားတှငျပွောငျးလဲလွယ်ကူချောမွေ့ရန်အသုံးပြုစေခြင်းငှါ, mesocortical DA အဆင့်ဆင့်အတွက်သက်ဆိုင်ရာအတက်အကျအားဖြင့် PFC မှအချက်ပြစေခြင်းငှါ ရှေးခယျြမှုဘက်လိုက်မှု။ ဒါဟာရေကြီးမှု D2 receptors နောက်ဆုံးမှာရွေးချယ်မှုပိုငြိမ်ပုံစံများထုတ်လုပ်နိုင်သောဤပြောင်းလဲနေသော signal ကို, နှောင့်အယှက်စေခြင်းငှါအောက်ပါအတိုင်း။
အန္တရာယ်-based ဆုံးဖြတ်ချက်ချရန် PFC D1 နှင့် D2 receptors ၏ Dissociable ပံ့ပိုးမှုများကို
မေးခွန်း D1 သို့မဟုတ် D2 receptors ၏ပိတ်ဆို့ endogenous DA နှစ်ဦးစလုံး receptors မြှင့်လုပ်ဆောင်ကြောင်းပေးထား, အန္တရာယ်များရွေးချယ်မှုအပေါ်ဆန့်ကျင်သက်ရောက်မှုကွိုးစားအားထုသငျ့သညျအဘယျကွောငျ့အဖြစ်ကျန်ရှိနေဆဲဖြစ်သည်။ ဤအ receptors differential PFC အာရုံကြောကွန်ရက်လှုပ်ရှားမှုဤကိစ္စကိုသို့ထိုးထွင်းသိမြင်မှုပေးစေခြင်းငှါအကျိုးသက်ရောက်စေပုံကိုအပေါ်ခေတ်ပြိုင်သီအိုရီ (။ Durstewitz et al, 2000; Seaman နှင့်ယန်, 2004) ။ D1 receptors တစ်ခုတည်းကိုယ်စားပြုမှု PFC output ကိုလက်ဝါးကြီးအုပ်ချယ်လှယ်နိုင်အောင်ကွန်ရက်လှုပ်ရှားမှုတည်ငြိမ်, အားနည်းသွင်းအားစုများ၏သြဇာလွှမ်းမိုးမှုလျော့နည်းကျဆင်းရန်အဆိုပြုခဲ့ကြသည်။ ပြောင်းပြန် D2 လှုပ်ရှားမှုကိုယ်စားပြုပြောင်းလဲမှုများခွင့်စခွေငျးငှါတစ်ဦးထက်ပို labile ပြည်နယ်တွင်ဤကွန်ရက်များအားမရ, မျိုးစုံလှုံ့ဆော်မှု / ကိုယ်စားပြုမှုကို process မှ PFC အာရုံကြော ensembles ခွင့် inhibitory လွှမ်းမိုးမှု attenuates.
ဒီနေရာမှာအသုံးပြုတဲ့ဖြစ်နိုင်ဖွယ်အလားအလာလျှော့အလုပ်တခုကို၏ကွဲပြားခြားနားသောအဆင့်စဉ်အတွင်းအချို့သောအချက်များမှာတိရိစ္ဆာန်များ (လုပ်ကွက်ကိုဖြတ်ပြီး) ကိုကြီးမားသော / အန္တရာယ်များ option ကို၏ဆွေမျိုးတန်ဖိုးဟာသူတို့ရဲ့ကိုယ်စားပြုမှု (ကဖြစ်နိုင်ခြေပိတ်ပင်တားဆီးမှုအတွင်း) ကိုထိန်းသိမ်းရန်သို့မဟုတ်ပြုပြင်မွမ်းမံရမယ်ဖြစ်စေ။ ထို့ကြောင့်ဤနေရာတွင်ဖော်ပြထား D1 / D2 ဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်ခြင်း၏ဆန့်ကျင်သက်ရောက်မှုများတာဝန်များ၏ကွဲပြားအဆင့်စဉ်အတွင်းထိုအ receptors ၏ differential ကိုပံ့ပိုးမှုများကိုရောင်ပြန်ဟပ်လိမ့်မည်။ D1 လှုပ်ရှားမှုတစ်အန္တရာယ်များရွေးချယ်မှု (ထို "ဟုအဆိုပါဆုချီးမြှင့်အပေါ်မျက်စိ" စောင့်ရှောက်ခြင်း) ပျက်ကွက်ဆုချမှဦးဆောင်လျှင်ပင်ရွေးချယ်မှုဘက်လိုက်မှုထိန်းသိမ်းခြင်း, တစ်ဦးအထူးသဖြင့်လုပ်ကွက်အတွင်းအန္တရာယ်များ option ကို၏ဆွေမျိုးရေရှည်တန်ဖိုးကို၏ကိုယ်စားပြုမှုတည်ငြိမ်လိမ့်မည်။ ဤအ receptors ပိတ်ဆို့ခြင်း (ဆိုလိုသည်မှာဆုံးရှုံး-ပြောင်းကုန်ပြီသဘောထားတွေကိုတိုးမြှင့်) ပျက်ကွက်ဆုချမှတိရိစ္ဆာန်များကိုပိုမိုထိခိုက်မခံစေနှင့်အန္တရာယ်များရွေးချယ်မှုလျှော့ချမယ်။ ကြီး / အန္တရာယ်များ option ကိုလုပ်ကွက်များအနှံ့နည်းပါးလာဆုလာဘ်ဖြစ်ထွန်းအဖြစ်ပြောင်းပြန်, (ဖြစ်နိုင်သည်တစ်ဦးကွဲပြားခြားနားအာရုံခံလူဦးရေအပေါ်) D2 receptors တန်ဖိုးကိုကိုယ်စားပြုထဲမှာပြုပြင်မွမ်းမံလွယ်ကူချောမွေ့စေနိုင်သည်။ ကဲ့သို့သောသူတို့၏လှုပ်ရှားမှုကိုလျှော့ချသည်ဤကိုယ်စားပြုခြင်းနှင့်ရွေးချယ်မှုဘက်လိုက်မှုအတွက်သက်ဆိုင်ရာအပြောင်းအလဲများကို၏မွမ်းမံနှောင့်အယှက်လိမ့်မယ်။ ဒါကမော်ဒယ်လည်းတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအသီးသီးကြီး / အန္တရာယ်များ option ကိုပိုမိုမြဲရှေးခယျြမှုဖြစ်စေဖို့ဦးဆောင်လမ်းပြတစ်ခုသို့မဟုတ် "hyperflexible" ပြည်နယ်သွေးဆောင်ဖို့မျှော်လင့်ထားလိမ့်မယ်လို့ထားတဲ့တိုးပွားလာ D1 နှင့် D2 အဲဒီ receptor လှုပ်ရှားမှု၏သက်ရောက်မှုများအတွက်အကောင့်လိမ့်မည်။ ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့၏တွေ့ရှိချက် PFC DA သေံအန္တရာယ် / ဆုလာဘ်တရားစီရင်ပိုင်တစ်ဦးဝေဖန်ပြီးရှုပ်ထွေးအလှူငွေစေသည်အကြံပြုအပ်ပါသည်။ D1 / D2 အဲဒီ receptor လှုပ်ရှားမှုအကြားဒဏ်ငွေချိန်ခွင်လျှာသပိတ်မှောက်ခြင်းအားဖြင့်, mesocortical DA သည့်အခါအခြေအနေများပြောင်းလဲမှုလက်ရှိအဆင်သင့်ခွအေနမြေား၏ခေါင်းပုံဖြတ်သို့မဟုတ်ထိုထက်ပိုအမြတ်အစွန်းမြား၏တူးဖော်ရေးဖြစ်စေမြှင့်တင်ရန်, ကွဲပြားပြင်းအားနှင့်မသေချာမရေရာ၏ရွေးချယ်မှုများအကြားကုန်ကျစရိတ် / အကျိုးအတွက်ဆုံးဖြတ်ချက်များသနျ့ကိုကူညီလိမ့်မည်။
ဤလုပ်ငန်းကနျြးမာရေးသုတေသနအကြီးတန်းပညာရှင်နှင့် JRSO များအတွက်မိုက်ကယ်စမစ်ဖောင်ဒေးရှင်းသဘာဝသိပ္ပံနှင့်အင်ဂျင်နီယာသုတေသနကနေဒါ၏ကောင်စီနှင့်မိုက်ကယ်ကနေပညာသင်ဆုများ၏လက်ခံရရှိသူဖြစ်ပါသည် SBFSBF မှကနျြးမာရေးသုတေသန (ကြမ်းတိုက်အဝတ်စုတ် 89861) ၏ကနေဒါ Institutes ကနေထောက်ပံ့ကြေးကထောက်ခံခဲ့သည် ကနျြးမာရေးသုတေသန Smith ကဖောင်ဒေးရှင်းမှ။
စာပေးစာယူဒေါက်တာ Stan ခ Floresco, စိတ်ပညာနှင့်ဦးနှောက်သုတေသနစင်တာမှဦးစီးဌာန, ဗြိတိသျှကိုလံဘီယာတက္ကသိုလ်, 2136 အနောက် Mall, ဗန်ကူးဗား, ဘီစီ V6T 1Z4 မှကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းသင့်ပါတယ်, [အီးမေးလ်ကိုကာကွယ်ထားသည်]
မူပိုင်ခွင့်© 2011 စာရေးသူ 0270-6474 / 11 / 318625-09 $ 15.00 / 0
1 ။ Ahn S က,
2 ။ Phillips က AG က
(1999) Dopaminergic ကြွက်များ၏ medial prefrontal cortex နဲ့နျူကလိယ accumbens အတွက်အာရုံခံ-တိကျတဲ့မွတ်မပြေ၏ဆက်နွယ်နေပါသည်။ J ကို neuroscience 19: RC29, (1-6) ။
1 ။ Bardgett ME,
2 ။ Depenbrock M က,
3 ။ Down N ကို,
4 ။ ရမှတ်က M,
5 ။ အစိမ်းရောင် L ကို
(2009) Dopamine အားထုတ်မှု-based ဆုံးဖြတ်ချက်ချကြွက်များတွင် modulates ။ ပြုမူနေ neuroscience 123: 242-251 ။
1 ။ Bari ကတစ်ဦး,
2 ။ လင်းယုန် DM,
3 ။ မတ်လ AC အ,
4 ။ ရော်ဘင်ဆင် ES,
5 ။ Robbins TW
ကြွက်များတွင်ရပ်တန့်လုပ်ငန်းတာဝန်စွမ်းဆောင်ရည်အပေါ် noradrenaline, dopamine နှင့် serotonin လွှာမှပိတ်ဆို့ထားခြင်း၏ (2009) Dissociable ဆိုးကျိုးများ။ Psychopharmacology 205: 273-283 ။
1 ။ Cardinal RN,
2 ။ Howes NJ
ယင်းနျူကလိယ၏တွေ့ရှိရပါသည်၏ (2005) အကျိုးသက်ရောက်မှုသေးငယ်တဲ့အခြို့သောဆုလာဘ်များနှင့်ကြွက်များအတွက်ကြီးမားသောမသေချာမရေရာဆုလာဘ်များအကြားရွေးချယ်မှုအပေါ်အဓိက accumbens ။ BMC neuroscience 6: 37 ။
2 ။ Robbins TW,
3 ။ Everitt BJ
ကြွက်များတွင်အချက်ပြခြင်းနှင့် unsignalled နှောင့်နှေးအားဖြည့်များ၏ရွေးချယ်မှုအပေါ်ဃ-စိတ်ကြွဆေး, chlordiazepoxide, alpha-flupenthixol နှင့်အပြုအမူဆိုင်ရာထိန်းသိမ်းရေး၏ (2000) အဆိုပါဆိုးကျိုးများ။ Psychopharmacology 152: 362-375 ။
1 ။ Chudasama Y ကို,
2 ။ Robbins TW
(2004) Dopaminergic အမြင်အာရုံအာရုံစိုက်မှုများ၏မော်ဂျူနှင့်ကြွက် prefrontal cortex အတွက်အလုပ်လုပ်နေမှတ်ဉာဏ်။ Neuropsychopharmacology 29: 1628-1636 ။
1 ။ ဝမ်းကွဲက MS,
2 ။ ဝေ W က,
3 ။ Salamone JD
တစ်ဦးတွင်တစ်ပြိုင်တည်းလီဗာကိုနှိပ် / နို့တိုက်ကျွေးရေးရွေးချယ်မှုလုပ်ထုံးလုပ်နည်းအပေါ်စွမ်းဆောင်ရည် (1994) Pharmacological စရိုက်လက္ခဏာတွေ: dopamine ရန်, cholinomimetic, သက်သာစေသောဆေးနှင့်လှုံ့ဆော်မူးယစ်ဆေးဆိုးကျိုးများ။ Psychopharmacology 116: 529-537 ။
1 ။ Denk က F,
2 ။ ဝေါ်လ်တန် ME,
3 ။ Jennings Ka,
4 ။ ချွန်ထက် T က,
5 ။ Rushworth MF,
6 ။ Bannerman DM
(2005) နှောင့်နှေးသို့မဟုတ်အားထုတ်မှုနှင့် ပတ်သက်. ကုန်ကျစရိတ်-အကျိုးအတွက်ဆုံးဖြတ်ချက်များအတွက် serotonin နဲ့ dopamine စနစ်များပါဝင်ပတ်သက်မှု Differential ။ Psychopharmacology 179: 587-596 ။
1 ။ Durstewitz: D,
2 ။ Seaman JK,
3 ။ Sejnowski တီဂျေ
အလုပ်လုပ်မှတ်ဉာဏ်၏ (2000) Neurocomputational မော်ဒယ်များ။ နတ် neuroscience3(ပျော့ပျောင်း): 1184-1191 ။
1 ။ Floresco SB,
2 ။ Magyar အို
အလုပ်အမှုဆောင်လုပ်ဆောင်ချက်များကို၏ (2006) Mesocortical dopamine မော်ဂျူ: အလုပ်လုပ်ကိုင်မှတ်ဉာဏ်ထက်ကျော်လွန်။ Psychopharmacology 188: 567-585 ။
2 ။ Whelan JM
ထပ်ခါတလဲလဲစိတ်ကြွဆေးထိတွေ့မှုအားဖြင့်သွေးဆောင်အောင်ကုန်ကျစရိတ် / အကျိုးအတွက်ဆုံးဖြတ်ချက်၏ကွဲပြားခြားနားသောပုံစံများ (2009) အထင်သည်တုန်လှုပ်မှုတည်း။ Psychopharmacology 205: 189-201 ။
3 ။ Ghods-Sharifi S က,
4 ။ Vexelman ကို C,
5 ။ စီ MT
ကြွက်များ၏ medial prefrontal cortex အတွက် (2006) အကွိမျမြားစှာ dopamine အဲဒီ receptor Subtype set-ပုံစံအပြောင်းအလဲလုပ်ထိန်းညှိ။ Neuropsychopharmacology 31: 297-309 ။
2 ။ စီ MT,
3 ။ Ghods-Sharifi S က
(2008a) Dopaminergic နှင့်ကြိုးစားအားထုတ်မှုနှင့်နှောင့်နှေး-based ဆုံးဖြတ်ချက်ချ၏ glutamatergic စည်းမျဉ်း။ Neuropsychopharmacology 33: 1966-1979 ။
2 ။ စိန့်Önge JR,
4 ။ Winstanley, CA
ကုန်ကျစရိတ်-အကျိုးအတွက်ဆုံးဖြတ်ချက်ချ၏ကွဲပြားခြားနားသောပုံစံများ subserving (2008b) Cortico-limbic-striatal ဆားကစ်။ 8-375: Cogn ပြုမူနေ neuroscience 389 အပေါ်ဘယ်လိုသက်ရောက်မှု။
1 ။ Ghods-Sharifi S က,
3 ။ Floresco SB
(2009) ဆုံးဖြတ်ချက်ချ၏ကွဲပြားခြားနားသောပုံစံများကိုရန် basolateral amygdala တို့ကအခြေခံပံ့ပိုးမှုများ။ J ကို neuroscience 29: 5251-5259 ။
1 ။ Granon S က,
2 ။ Passetti က F,
3 ။ သောမတ်စ် KL,
4 ။ Dalley JW,
5 ။ Everitt BJ,
6 ။ Robbins TW
(2000) Enhanced နှင့်ကြွက် prefrontal cortex သို့ D1 dopaminergic အဲဒီ receptor အေးဂျင့်များ၏ပြုတ်ရည်ပြီးနောက်ချို့ယွင်းအာရုံစူးစိုက်မှုကိုစွမ်းဆောင်ရည်။ J ကို neuroscience 20: 1208-1215 ။
1 ။ Haluk DM,
2 ။ Floresco SB
အမူအကျင့်ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်၏ကွဲပြားခြားနားသောပုံစံများ၏ (2009) Ventral striatal dopamine မော်ဂျူ။ Neuropsychopharmacology 34: 2041-2052 ။
1 ။ Hutton SB,
2 ။ မာဖီ FC အသင်း,
3 ။ Joyce EM,
4 ။ ရော်ဂျာက RD,
5 ။ Cuthbert ငါ
6 ။ Barnes TR,
7 ။ McKenna PJ,
8 ။ Sahakian BJ,
9 ။ Robbins TW
ပထမဦးဆုံးအ-ဇာတ်လမ်းတွဲနှင့်နာတာရှည် schizophrenia နှင့်အတူလူနာအတွက်လိုငွေပြမှုအောင် (2002) ဆုံးဖြတ်ချက်။ Schizophr Res 55: 249-257 ။
1 ။ Jocham, G,
2 ။ Klein က TA,
3 ။ Ullsperger M က
အဆိုပါ striatum အတွက် (2011) Dopamine-mediated အားဖြည့်သင်ယူခြင်းအချက်ပြမှုများနှင့် ventromedial prefrontal cortex တန်ဖိုးကို-based ရွေးချယ်မှုအခြေခံ။ J ကို neuroscience 31: 1606-1613 ။
1 ။ လာကြောင်းတွေ့ဆုံမေးမြန်းထားပါတယ် M က,
2 ။ Pattij T က,
3 ။ Janssen MC,
4 ။ Counotte DS,
5 ။ Schoffelmeer AN,
6 ။ Smit AB,
7 ။ Spijker S က,
8 ။ ဗန် Gaalen MM
အဆိုပါ medial prefrontal cortex အတွက် (2010) Dopamine အဲဒီ receptor D1 / D5 ဗီဇစကားရပ်ကြွက်များတွင်ထကြွလွယ်သောရွေးချယ်မှုခန့်မှန်းထားပါတယ်။ Cereb Cortex 20: 1064-1070 ။
1 ။ McLean တစ်ဦးက,
2 ။ Rubinsztein JS,
3 ။ Robbins TW,
4 ။ Sahakian BJ
ပုံမှန်ကျန်းမာစေတနာ့ဝန်ထမ်းအတွက် tyrosine ကွယ်ပျောက်သွားစေ၏ (2004) ကသက်ရောက်မှု: ရပ်များမှာတစ်ဘက်စွန်းစိတ်ကျရောဂါများအတွက်ဂယက်ရိုက်။ Psychopharmacology 171: 286-297 ။
1 ။ Pagonabarraga J ကို,
2 ။ Garcia-Sanchez ကို C,
3 ။ Llebaria, G,
4 ။ Pascual-Sedano B က,
5 ။ Gironell တစ်ဦးက,
6 ။ Kulisevsky J ကို
(2007) ဆုံးဖြတ်ချက်ချခြင်းနှင့်ပါကင်ဆန်ရောဂါအတွက်သိမြင်မှုချို့ယွင်း၏ထိန်းချုပ်မှုလေ့လာမှု။ Mov Disord 22: 1430-1435 ။
1 ။ Paxinos, G,
2 ။ Watson ကို C
(1998) stereotaxic သြဒီနိတ် (Academic, San Diego မှ) တွင်အဆိုပါကြွက်ဦးနှောက်, Ed က4။
1 ။ ME Ragozzino
အမူအကျင့်ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်အပေါ် prelimbic-infralimbic ဒေသများရှိ (2002) က dopamine ၏ဆိုးကျိုးများ: D (1) အဲဒီ receptor ပိတ်ဆို့ထားခြင်း။ 9-18: Mem ကို 28 လေ့လာပါ။
1 ။ ရော်ဂျာက RD,
2 ။ Everitt BJ,
3 ။ Baldacchino တစ်ဦးက,
4 ။ Blackshaw AJ,
5 ။ Swainson R ကို,
6 ။ Wynn K သည်,
7 ။ Baker NB,
8 ။ မုဆိုးဂျေ,
9 ။ Carthy T က,
10 ။ Booker အီး,
11 ။ ဗြိတိန်နိုင်ငံလန်ဒန်မြို့က M,
12 ။ Deakin JF,
13 ။ Sahakian BJ,
14 ။ Robbins TW
နာတာရှည်စိတ်ကြွဆေးချိုးဖောက်မှုများ, opiate ချိုးဖောက်မှုများ, prefrontal cortex မှ focal ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုနှင့်အတူလူနာနဲ့ tryptophan-ကုန်ခမ်းပုံမှန်စေတနာ့ဝန်ထမ်းများ၏ဆုံးဖြတ်ချက်ချမှတ်သိမှတ်ခံစားမှုအတွက် (1999) Dissociable လိုငွေပြမှု: monoaminergic ယန္တရားများအဘို့သက်သေသာဓက။ Neuropsychopharmacology 20: 322-339 ။
1 ။ Schweimer J ကို,
2 ။ Hauber W က
အဆိုပါ anterior cingulate cortex အတွက် (2006) Dopamine D1 receptors အားထုတ်မှု-based ဆုံးဖြတ်ချက်ချထိန်းညှိ။ 13-777: Mem ကို 782 လေ့လာပါ။
2 ။ Saft S က,
3 ။ Hauber W က
ကြိုးစားအားထုတ်မှု-related ဆုံးဖြတ်ချက်ချအတွက်ကြွက် anterior cingulate အတွက် catecholamines neurotransmission ၏ (2005) ပါဝင်ပတ်သက်မှု။ ပြုမူနေ neuroscience 119: 1687-1692 ။
1 ။ Seaman JK,
2 ။ ယန် CR
(2004) ကို prefrontal cortex အတွက် dopamine မော်ဂျူ၏ကျောင်းအုပ်ကြီး features နဲ့ယန္တရားများ။ prog Neurobiol 74: 1-58 ။
2 ။ Floresco SB,
3 ။ Phillips က AG က
ကြွက်များတွင်အလုပ်အမှုဆောင်လုပ်ဆောင်ချက်များကိုနှင့်အတူ Spatial မှတ်ဉာဏ်ကိုပေါင်းစပ် hippocampal-prefrontal cortical ဆားကစ်၏ (1998) D1 အဲဒီ receptor မော်ဂျူ။ J ကို neuroscience 18: 1613-1621 ။
1 ။ စိန့်Önge JR,
အန္တရာယ်-based ဆုံးဖြတ်ချက်ချ၏ (2009) Dopaminergic မော်ဂျူ။ Neuropsychopharmacology 34: 681-697 ။
2 ။ chiu YC,
(2010) အန္တရာယ်များရွေးချယ်မှုအပေါ် dopaminergic ထိန်းသိမ်းရေး၏သက်ရောက်မှု Differential ။ Psychopharmacology 211: 209-221 ။
(2010) Prefrontal အန္တရာယ်-based ဆုံးဖြတ်ချက်ချရန် cortical အလှူငွေ။ Cereb Cortex 20: 1816-1828 ။
1 ။ အဆို့ CM,
အန္တရာယ်-based ဆုံးဖြတ်ချက်ချ၏ကွဲပြားခြားနားသောရှုထောင့်ဖို့နျူကလိယ accumbens နှင့်၎င်း၏ငျဒသေ၏ (2011) ပံ့ပိုးမှုများကို။ 11-97: Cogn ပြုမူနေ neuroscience 112 အပေါ်ဘယ်လိုသက်ရောက်မှု။
1 ။ ဗန် Gaalen MM,
2 ။ ဗန် Koten R ကို,
3 ။ Schoffelmeer AN,
4 ။ Vanderschuren LJ
ထကြွလွယ်သောဆုံးဖြတ်ချက်ချမှတ်ခြင်းအတွက် dopaminergic neurotransmission ၏ (2006) ဝေဖန်ပါဝင်ပတ်သက်မှု။ Biol စိတ်ရောဂါကုသမှု 60: 66-73 ။
1 ။ Williams က GV,
2 ။ Goldman-Rakic ​​PS
prefrontal cortex အတွက် dopamine D1995 receptors အားဖြင့်မှတ်ဉာဏ်လယ် (1) Modulation ။ သဘာဝတရား 376: 572-575 ။
1 ။ Winstanley, CA,
2 ။ Theobald DE,
3 ။ Dalley JW,
4 ။ Robbins TW
ကြွက်များတွင်ထကြွလွယ်သောရွေးချယ်မှုများထိန်းချုပ် serotonin နဲ့ dopamine အကြား (2005) ဆက်သွယ်မှု: ချင်တဲ့ဒေါသစိတ်နဲ့ထိန်းချုပ်မမှန်များအတွက်ကုထုံးဂယက်ရိုက်။ Neuropsychopharmacology 30: 669-682 ။
4 ။ Cardinal RN,
medial prefrontal နှင့်ထကြွလွယ်သောရွေးချယ်မှု orbitofrontal cortex ၏ serotonergic နှင့် dopaminergic မော်ဂျူတို့အကြား (2006) နှစ်ချက် dissociation ။ Cereb Cortex 16: 106-114 ။